MYU SHADAN: March 2013
Myu Shadan Blog hta sadu shang chyai ai tsaw ra ai manaw manang nie,
ndai shata kaw na gaw blog hpe aten dep nlu shakyi sana re hpe chye shangun mayu nngai,
Rai tim mung manaw manang niamatu akyu lu hta la mai ai ni grai mahkawng da ya ga ai.
tinang hte htaphtuk ai chye mayu ai ni hpe shang shalau let naw ngun jaw la marit ngu na mung saw lajin mayu nngai .
Yat hpang de she aten atsawm shajin la nhtawm manaw manang niamatu akyu rawng ai post ni hpe aten dep dep hte mara sa wa na re hpe ga htet dat nngai law law..
Myu Shadan (myushadankachin@gmail.com)
Posted by myu shadan at 12:27 AM No comments:
Posted by myu shadan at 11:52 PM No comments:
သတင်း	- ရွှေဟင်္သာ သတင်းဌာန
“မနေ့က ဦးအောင်မင်း ဖိတ်စာ ပို့လာတယ်။ လာမယ့် မတ်လ (၂၂/၂၃) ရက်နေ့မှာ မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာ(MPC) မှာ ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ဖို့ ပြောလာတယ်။ ကျနော်တို့ ဘက်ကလည်း သွားတွေ့မယ်လို့ အကြောင်းပြန် ထားတာ ရှိပါတယ်။” ဟု ဆိုသည်။ တင်ပြ ဆွေးနွေးကြမည့် အချက်များကို ထုတ်ဖော် ပြောကြား၍ မရသေးကြောင်းနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၂၅) ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် ပြည်နယ် အဆင့် ပဏာမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့စဉ်က တင်ပြချက် (၆) ချက်အပေါ် ဆက်လက် ဆွေးနွေး သွားဖွယ် ရှိကြောင်း PNLO ဖက်က ဆိုသည်။
ထိုစဉ်က PNLO ဘက်မှ တင်ပြခဲ့သည့် ၆ ချက်မှာ အပစ်ရပ်ရေး လက်မှတ် ရေးထိုးရန်၊ ဆက်ဆံရေးရုံး ဖွင့်ရန်၊ လက်နက် မပါဘဲ လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ပြုရန်၊ အပစ်ရပ် ပြီးနောက် ပအိုဝ်း ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ပြဿနာအား အစိုးရနှင့် လက်တွဲ၍ ဖြေရှင်းသွားရန် မီဒီယာများနှင့် လွတ်လပ်စွာ တွေ့ဆုံခွင့်ပြုရန်တို့ ဖြစ်သည်။
ပအိုဝ့် PNLO နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းအဖွဲ့တို့ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အလွတ်သဘော (၃) ကြိမ် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး စဉ်က တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အင်အားစု အားလုံး ပါဝင်သော တွေ့ ဆုံပွဲမျိုး ပြုလုပ်ပေးရေး အပါအဝင် စုစုပေါင်း အချက် ၁၁ ချက်ကို PNLO ဘက်က တောင်းဆို ခဲ့သည်။
သို့သော် ငြိမ်းအဖွဲ့ ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းဘက်ကမူ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးသည် ပထမ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းသည် ဒုတိယနှင့် တတိယ အဆင့်အနေဖြင့် ရေရှည်နိုင်ငံရေး အတွက် လွှတ်တော်ထဲ၌ ဝင်ရောက် လုပ်ဆောင် သွားကြရန် အဆင့် (၃) ဆင့်ပါသော အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ပြန်လည် ရှင်းပြ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့ တတိယအကြိမ် ထိုင်းနိုင်ငံ တွေ့ဆုံပွဲ၌ PNLO ဘက်မှ တင်ပြချက် (၆) ချက်အား အစိုးရဘက်က လက်ခံခဲ့သဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို မူအရ သဘောတူခဲ့ရာမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ် လ (၂၅) ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်နယ် အဆင့် ပဏာမ တွေ့ဆုံပွဲတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူလက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲမှ ပြည်ထောင်စု အဆင့် တွေ့ဆုံပွဲများကို နောက် (၃) လအတွင်း ဆက်လက် ကျင်းပ သွားကြရန် နှစ်ဖက် သဘောတူခဲ့သော်လည်း လက်တွေ့တွင် (၆) လခန့် ကြာမြှင့်ခဲ့ပြီး လာမည့်မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် တွေ့ဆုံကြမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးခွန်ဥက္ကာက ပြောဆိုသည်။
Posted by myu shadan at 11:50 PM No comments:
Atomix Virtual DJ Pro 7.2 Build 422 Full (Mediafire Link)
ဒီဆော့ဝဲလ် ကျွန်တော် တင်ထားပြီး ပိုစ့်မရေးအားတာနဲ့ ခုမှ ရှယ်ပေးလိုက်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်လဲ မိတ်ဆွေများ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာတော့ အကြောင်းမရှိတဲ့ ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုပါပဲ လူတိုင်းမှ မသုံးတာကိုးဗျာ နော် လူတိုင်းမရှိမဖြစ် သုံးရမယ့် ဆော့ဝဲလ်တွေကိုတော့ တက်တက်ခြင်းပဲ တင်ပေးပါတယ် နဲနဲ အချိန်တော့ လုရတာပေါ့ လေ ကဲ သုံးမယ်ဆိုသူများ အောက်မှာ ယူထားလိုက်ပါ
Cod : Portable Version
Posted by myu shadan at 11:34 PM No comments:
Posted by myu shadan at 11:29 PM No comments:
တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့အရှေ့ဖက်မှာတည်ရှိပြီး ရှမ်းပြည်၊ ကချင်ပြည်တို့နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေပါတယ်။လူဦး ရေ သန်းပေါင်း (၁၃၀၀) ခန့်ရှိပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိလူဦးရေကတော့ ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်မှာ သန်းပေါင်း (၆၀) နီးပါး လောက်ရှိပြီး ၂၀၁၀ အကုန်မှာတော့ (၆၁) သန်းကျော် ရှိလာတော့မှာလို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ မြန် မာပြည် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးဖြစ်အပြီး တပ်မတော်က ပြန်ပြီး ထပ်ဆင့်အာဏာသိမ်းချိန်ကစလို့ တရုတ်အစိုးရ ဟာ န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရနဲ့ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ အကြီးအကျယ် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လာလိုက် တာ ဒီကနေ့ စစ်အစိုးရတဖြစ်လဲ ဘောင်းဘီချွတ်ကြံ့ဖွံ့အစိုးရ အထိပါပဲ။
ပြည်ပသုတေသီတွေအဆိုအရ မြန်မာပြည်အပေါ်ထားတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့ မူဝါဒတွေမှာ ရည်ရွယ်ချက် (၆)ချက်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ..
- တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ဘက်က အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကို ဆက်သွယ်တဲ့ လမ်းကြောင်းလုံခြုံရေး။
- နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရေး။
- တရုတ်ပြည်ရဲ့လောင်စာစွမ်းအင် စိတ်ချဖူလုံစေရေး။
- တရုတ်-မြန်မာအကြား စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်ရေး။
- အိန္ဒိယနိုင်ငံ အင်အားကြီး ခေါင်းထောင်ထလာလာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်ရေး။
- မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ဆက်ဆံရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရေး။ စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၁ခုနှစ် စာရင်းအရဆို မြန်မာပြည်မှာ တွက်ချက်အတည်ပြုပြီးထုတ်ယူနိုင်တဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပမာဏ (၂၈၃.၂) ဘီ လျံ ကုဗမီတာရှိပြီး တရုတ်ပြည်မှာက (၈၀၀) ဘီလျံ ကုဗမီတာ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုပ်ပြည်က သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သိုက် ပမာဏရဲ့ (၃)ပုံတပုံကျော်လောက် ရှိနေပါတယ်။ ဒီဓါတ်ငွေ့သိုက်တွေဟာ အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ မြန်မာ့ရေပိုင်နက်ထဲက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ မုတ္တမပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ဟာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့် လောင်စာစွမ်းအင်တွေ ပိုပြီးလိုအပ်လာပါတယ်။ ပြည်ပက တင် သွင်းနေရတဲ့အပေါ် မှီခိုနေရမှုက ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ (၃၄%)၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ (၅၀%) ရှိလာပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ (၆၀%) ရှိလာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီရေနံတင်သွင်းတာရဲ့ (၈၀%) ဟာ မလက္ကာရေလက်ကြားကတဆင့် ဖြတ်နေရပါတယ်။
အထက်ကဖော်ပြတဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းအချက်တွေက တရုတ်ပြည်ကို ရေနံနဲ့ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေ တည်ဆောက်ဖို့နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်လာစေဖို့ တွန်းအားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါ့ပြင် စီးပွားရေးတိုးတက်လာနေတဲ့ တရုတ်ပြည်အတွက် မြန်မာပြည်ဟာ ကုန်ချောတပိုင်းထုတ်ကုန်တွေ ထောက်ပံ့တဲ့ အဓိကနေရာနဲ့ ဈေးပေါတဲ့ လုပ်အားနဲ့ကုန်ကြမ်းရေသောက်မြစ်ရရာ ဒေသ ဖြစ်လာနေပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကတဆင့် စရိတ်စခနည်းတဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှုကလည်း တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် မုချအကျိုးရှိစေ တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ဖြောင့်ဖြူးလာတာက တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပထ၀ီ နိုင်ငံရေး အကျိုးစီးပွားအတွက် စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားစေတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပီး ဧရာဝတီမြစ်ကို ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်အဖြစ်ရော ပင်လယ်ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးပြုဖို့ စီစဉ်လာတာတွေ၊ စတာတွေက လည်း မြန်မာ-တရုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေထဲက မဟာဗျူဟာကျတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူနန်က ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရန်ကုန်၊ သီလဝါဆိပ် ကမ်းအထိ ကုန်ကြောင်းရေကြောင်းနဲ့ သယ်ယူပို့ ဆောင်ဖို့စီမံကိန်းကလည်း အစီအစဉ် ရှိထားပါတယ်။ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းမှာ အပိုင်း (၃) ပိုင်း ပါဝင်ပါတယ်။ ပထ မ ပိုင်းက မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် ဗန်မော်နားက ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းကို ကားလမ်းနဲ့ ဆက်သွယ်တာ၊ ဒုတိယပိုင်းအနေ နဲ့ ကွန်တိန်နာ ဆိပ်ကမ်းဆောက်တာနဲ့ တတိယပိုင်းက ဧရာဝတီမြစ်ရေစီးကြောင်းနက်ဖို့ သောင်တူးဖော်တဲ့အပိုင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ် ကွန်တိမ်နာပေါင်း နှစ်သန်းလောက် နှစ်စဉ် သယ်ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖြတ်လမ်းအဖြစ် အသုံးပြုပြီး အိန္ဒိယ-အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ ဥရောပကို တရုတ်ကုန်တွေ ပို့ဖို့ ပင်လယ်ရေလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ အသုံးချဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ ဒီစီမံကိန်းတွေဟာ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလိုပဲ အကြောင်းကြောင်းတွေ ကြောင့် ရပ်နားထားပါတယ်။
၁၉၉၇ ကစပြီး အနောက် နိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့် တရုတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီတွေရရေးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီတွေမှာ အကြီးဆုံး ရေသောက်မြစ် ဖြစ်လာပါတယ်။
တမိုးလုံးဖျောက်ဆိပ် ဖြစ်နေတဲ့ တရုတ်စီမံကိန်းတွေ
၂၀၀၈ခု နှစ်ကုန် စာရင်းတွေအရဆို မြန်မာ့ရေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း၊ ရေနံ-ဓါတ်ငွေ့နဲ့သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း စတဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းပေါင်း (၉၀) လောက် မှာ တရုတ်နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်း အနည်ဆုံး (၆၉) ခုလောက် ပါဝင်ပတ်သက်နေ ပါတယ်။ စီမံကိန်းတွေကတော့ ဆည်မြောင်း အငယ်စား ဆောက်လုပ်ခြင်းကအစ ကျောက်ဖြူကနေယူနန်ပြည်နယ်၊ ခွန်း မင်ထိ ရှည်တဲ့ ရေနံနဲ့ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေးထိ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်အကုန်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ တရုတ်ပြည်နဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၁.၄)ဘီလျံ သန်ပေါင်း (၁၄၀၀) တန်ဖိုးရှိတဲ့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာပေါင်း (၅၀၇) ခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ မှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၁)ဘီလျံ (သန်းပေါင်း ၂၁၀၀) တန်ဖိုးရှိတဲ့ စီမံကိန်း (၂၉၃) ခု ကန်ထရိုက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီး ၂၀၀၄ခု မတ်လမှာ သဘောတူညီချက် (၂၁) ခု လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါ တယ်။ ဒီ သဘောတူညီချက်တွေက အထူးချေးငွေနဲ့ စီးပွားရေးနဲ့နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
၂၀၀၆ စက်တင်ဘာလအထိ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့စီမံကိန်းတွေနဲ့ အလုပ်သမား ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပေါင်း (၈၂၅) ခု ရှိပါတယ်။
အများဆုံးကတော့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၇) ရက်ကနေ ၁၁ ရက်နေ့ထိ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ (၅) ရက်ကြာ တရုတ် ပြည် ခရီးစဉ်မှာ အတိုးမဲ့ချေးငွေအနေနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄.၂) ဘီလျံ ထုတ်ချေးခဲ့ပါတယ်။ သဘောတူညီချက် စာ ချုပ်ကိုတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်နဲ့ တရုတ်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကော်ပိုရေးရှင်း (CDBC) တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီချေးငွေတွေကို အဓိက ကျောက်ဖြူ-ခွန်းမင် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းနဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်း တည်ဆောက်ရေးတို့မှာ အသုံးပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ဖြူ-ခွန်းမင် ရေနံနှင့် ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူကနေ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်က ခွန်းမင်မြို့ထိ သွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံနဲ့ ဓါတ်ငွေ့ပိုက် လိုင်း (၂) ခု ကို ၂၀၁၃ခုနှစ် မတ်လမှာ အပြီးတည်ဆောက်ဖို့ မှန်းထားပြီး ဇွန်လမှာ စတင်သယ်ဆောင်နိုင်မယ်လုိ့ ခန့် မှန်းထားပါတယ်။ ဒီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းကနေ မြန်မာအစိုးရက နှစ်စဉ် တနှစ်ကို နိုင်ငံခြားငွေ ဒေါ်လာ (၁) ဘီလျံနဲ့ နှစ် ပေါင်း (၃၀) ခံစားရရှိမယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပီး ဒီပိုက်လိုင်းတလျှောက် ကျောက်ဖြူကနေ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ရွှေလီ ထိ ကီလိုမီတာ (၈၁၀) ရှည်တဲ့ ရထားလမ်းတခုလည်း တွဲဖက်ဖောက်လုပ်ပါအုန်းမယ်။ ရခိုင်ကမ်းခြေ မဒေးကျွန်းမှာ အ နောက်အာဖရိကနဲ့ အာဖရိက က သယ်လာမယ့် ရေနံတင်သင်္ဘောတွေ ဆိပ်ကပ်မယ့် ရေနက်ဆိပ်ကမ်းနဲ့ ရေနံစိမ်းတွေ သိုလှောင်မယ့် အဆောက်အဦတွေကိုလည်း ဆောက်လုပ်နေပါတယ်။ ဒီရေနံစိမ်းတွေနဲ့ ရွှေဂက်စ်ကထွက်မယ့် သဘာ ၀ဓါတ်ငွေ့တွေကို ဒီပိုက်လိုင်းတွေကတဆင့် တရုပ်ပြည်ကို သယ်ယူကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ပိုက်လိုင်းတလျှောက်ရထား လမ်း တည်ဆောက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာ စိုးမိုးနေတဲ့ အမေရိကန်ရေတပ် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ် ဖို့ အရေးပေါ်လိုအပ်လာရင် တရုပ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်းကို ရွှေ့ပြောင်းဖို့ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်တယ်” လို့လည်း စစ် ရေးအကဲခတ်တွေက ဆိုပါတယ်။
ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းတွေနဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမ စီမံကိန်းတွေ
တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း၊ ရထားလမ်းတွေနဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမတွေ တည်ဆောက်ဖို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ကူ ညီနေပါတယ်။ လောလောဆယ်ဆယ် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ စစ်တွေနဲ့ကျောက်ဖြူ ပယ်လယ်ရေနက် ဆိပ်ကမ်းတွေ တည် ဆောက်နေပါတယ်။ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ (၃၀၅) ကီလိုမီတာ ရှည်တဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမတခုကို တည် ဆောက်ပေးထားပါတယ်။ မကြာမီ ရှမ်းပြည်မှာ အာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အဆက် အသွယ်ဖြစ်တဲ့ လာရှိုးကို ဆက်သွယ်တဲ့ ၁၀၇ ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ ရထားလမ်းတခု တည်ဆောက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ပြည်က နည်းပညာ၊ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေအကုန်လုံး ကူညီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာစစ်အစိုးရကို (၂) ဘီလျံဖိုး စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်တွေ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ ရေပိုင်နက်ကကျွန်းပေါ်မှာ ရေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတွေ ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကို အဓိက လက်နက်တင် ပို့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်နက်ပစ္စည်း ၉၀% ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁.၂) ဘီလျံ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီ လုပ်ငန်းမှာ လက်နက်တွေ၊ စစ်ရေးနည်းပညာတွေနဲ့ လေ့ကျင့်ရေးတွေ အကူအညီပေးဖို့ ပါ ပါတယ်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အတွင်းမှာ တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရကို အလတ်စားတင့်ကား အစီး (၁၀၀)၊ အပေါ့စားတင့်ကား အစီး (၁၀၀)၊ တိုက်လေယာဉ် (၂၆၈) စီး၊ လူစီးသံချပ်ကာယာဉ် အစီး (၂၅၀)၊ စွယ်စုံသုံးဒုံးစနစ်များ၊ ဟောင်၀၀်ဇာအမြောက်တွေ၊ လေ ယာဉ်ပစ်သေနတ်တွေ၊ မြေပြင်ကဝေဟင်ပစ်ဒုံးပျံတွေ၊ စိန်ပြောင်းတွေ၊ ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်တွေ၊ ဗုံးလောင်ချာတွေ၊ ထရပ် ကားကြီးတွေ၊ ကင်းလှည့် မော်တော်ဘုတ်တွေ၊ ပဲ့ထိန်းအမြန်ဒုံးယာဉ်တွေ၊ မိုင်းရှင်းကရိယာတွေနဲ့ စက်သေနတ်တင် မော်တော်ဘုတ်တွေ ရောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ မြန်မာစစ်အစိုးရက ဒေါ်လာ သန်း (၄၀၀) တန် နောက်ထပ် လက်နက်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်း တခုကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်အရ ဟယ်လီကော်ပတာတွေ၊ လက်နက်ငယ်တွေ၊ အမြောက်တွေလို ရေတပ်သ င်္ဘောတွေနဲ့ သံချပ်ကာယာဉ်တွေ လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်မှာ စစ်ထရပ်ကား အစီး (၂၀၀) နဲ့ စစ်သင်္ဘော (၅) စီး ပို့ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အထိ တရုတ်ပြည်ဟာ ရေတပ်အရာရှိတွေကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် တောင်ပိုင်း ကမ်းခြေတလျှောက်မှာ ရေတပ်ပူးတွဲလေ့ကျင့်ရေးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ စစ်ထရပ်ကားအစီး (၄၀၀) ရောင်းချခဲ့တယ်။ ကိုကိုးကျွန်း၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်း၊ မြိတ်နဲ့ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ တြိဂံပုံ ရေတပ် အခြေစိုက် စခန်း (၄) ခု ကို တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းက မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဇာဒက်ကြီးကျွန်းကို အသုံး ပြုခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျွန်းဟာ မြန်မာပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံး ကော့သောင်းအနီး ၀ိတိုရိယအငူနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ တည်ရှိပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်အထိ မြန်မာပြည်မှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် အတော် လေး နည်းပါသေးတယ်။ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ မမြင်ရတဲ့ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ စီးပွာရေးဖက်စပ်လုပ်ငန်းတွေမှာသာ များ ပြားလှပါတယ်။ အများစုက မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကိုင်ထားတဲ့ ဆွေမျိုးတွေနာမည်နဲ့ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိ က မြို့ကြီးတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီး၊ လုပ်ငန်းငယ် အတော်များများဟာ တရုတ်တွေရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုတွေ ဖြစ်တယ်လို့ သုတေသီ မောင်အောင်မျိုးက သူ့ရဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်တည်ဆောက်ရေး စာအုပ်မှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထောက်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေဟာ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု တိုးလာနေလို့ သူတို့စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တွေ ဖြည့်တင်းဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို အဓိက ခြေ ဦးလှည့်လာကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်း၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့်စင်္ကာပူ နိုင်ငံတို့ဟာ ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်း၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း၊ သတ္ထုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အများဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ ဖြစ်လာပါ တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာ ၀င်ရောက်မစွက်ဖက်ရေးမူကို ကိုင်စွဲထားပေမဲ့ လည်း မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးမူဝါဒကတော့ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအပေါ်မှာပဲ အခြေပြု ထားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေရဖို့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို နိုင် ငံရေး၊ စစ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး အထောက်အကူတွေ အများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဘီလျံနဲ့ချီပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ ရေနံ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ့တွေလို မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ် နှံမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပထမ (၃)လပါတ်ထိ စာရင်းအရဆို တရုတ်နိုင်ငံဟာ ရေအားလျှပ် စစ်ကဏ္ဍမှာ အမေရိ ကန် ဒေါ်လာ (၅)ဘီလျံ၊ သတ္ထုကဏ္ဍမှာ ဒေါ်လာ ၉၉၇ သန်း၊ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍမှာ (၂.၁၅) ဘီလျံ မြှုပ်နှံ ထားတာကြောင့် လောလောဆယ်မှာ တရုတ် ပြည်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုက (၈.၁၇) ဘီလျံ ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၈ က စမယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်းဟာ ဒေါ်လာ (၂၀) ဘီလျံကျော်ရှိပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ (၁၂.၃၂) ဘီလျံဟာ တရုတ်ပြည်ကလာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက (၉.၅၆) ဘီလျံနဲ့ ဒုတိယလိုက်ပါတယ်။ အစိုးရစာရင်းဇယားတွေအရ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလကုန်ထိ စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၄.၇) ဘီလျံရှိပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၇၃၉၁.၈၄၃) နဲ့ ပထမနေရာမှာရှိပြီး တရုတ်ပြည်က ဒေါ်လာ (၄၇၅.၄၄၃)သန်းနဲ့ ဆဋ္ဌမ လိုက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်တဲ့ချေးငွေပုံစံနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီ တွေ ပေးတာတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ အားပေးထောက်ခံတာတွေနဲ့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့အပြင် သဘာဝ သယံဇာတ ပစ္စည်း ရှာဖွေရေးဘက်တွေမှာလည်း အကြီးအကျယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နအဖ ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလကုန်အထိ နိုင်ငံပေါင်း (၃၁) နိုင်ငံက အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၂) ဘီလျံ နီးပါးလာရောက် မြှုပ်နှံထားပြီး ရေနံနဲ့ သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍနဲ့ လျှပ် စစ် စွမ်းအားကဏ္ဍ နှစ်ရပ်မှာ အများဆုံးမြှုပ်နှံထားကြောင်း၊ အဆိုပါကဏ္ဍ နှစ်ခုထဲမှာ မြှုပ်နှံထားတဲ့ပမာဏဟာ မြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်းရဲ့ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်အထိ ရှိနေကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ်လာသန်းပေါင်း (၉၅၆၈.၀၉၃) သန်းနဲ့ ပထမနေရာက ရှိနေပြီး တရုတ်ပြည်က ဒေါ် လာသန်းပေါင်း (၆၄၁၅ .၀၅၈) သန်း နဲ့ ဒုတိယနေရာ က လိုက်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ စာရင်းအရ မြန်မာပြည်မှာ တိုက်ရိုက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစုစုပေါင်းဟာ အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၃၅,၅၁၈.၄၄) သန်း ထိရှိလာပြီး အဲဒီမှာ တရုတ်ပြည်က စုစုပေါင်းတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဲ့ (၂၇.၉၄) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ပထ မ နေရာရောက်လာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံက (၂၆.၉၄) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဒုတိယ ဟောင်ကောင်က (၁၆.၆၃) ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ တတိယ နေရာကို ရောက်လာပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက သမတဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် တရားဝင် ထုတ်ပြန်တဲ့ စာရင်းဇယားအရဆို တရုတ် ပြည်ရဲ့ တိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမျြုပ်နှံမှု (FDI) ဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄)ဘီလျံနီးပါး ရှိလာပြီး စုစုပေါင်း နိုင်ငံခြားတိုက် ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (FDI) ရဲ့ (၃၅) ရာခိုင်နှုန်း ရှိလာပါတယ်။ ဒါဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထက် အတော်ကျော် တက်သွားပြီး ပထမ နေရာမှာပဲ ဆက်လက်ဗိုလ်စွဲနေပါတယ်။
တရုတ်အစိုးရရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေ အရဆို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အကုန်မှာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစု ပေါင်းဟာ (၂၀.၂၆) ဘီလျံထိ ရှိလာပြီး ဗမာပြည်မှာ အဓိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူနေရာမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တရုတ်အစိုးရဟာ တစတစနဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေ၊ စစ်ရေးအကူအညီတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း တွေ၊ စီးပွားရေးမြှုပ်နှံမှုတွေ တစတစ တိုးချဲ့လာနေပြီး မြန်မာ့စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ပင်မအသက်သွေးကြောနေရာတွေ မှာ လွှမ်းမိုးမှုရဖို့ တဖြည်းဖြည်းချင်း ချဉ်းနင်းဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်တွေကို နှစ် ၂၀ ကျော် ကာလအကြာ ပြန်လှန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေတာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုကျော် ရှိလာပါ ပြီ။ တရုတ်ပြည်ကရတဲ့ ဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီတဲ့ အကူအညီတွေ၊ ချေးငွေတွေ၊ ဒေါ်လာဘီလျံနဲ့ချီတဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေ၊ လက် နက်တွေနဲ့ စစ်ရေးနည်းပညာထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့် ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အထီးကျန်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရဟာ ဆက်လက် တည်မြဲခဲ့ပြီး တောင့်တင်းကြံ့ခိုင်လာတယ်။ ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။
မြန်မာပြည်ဟာ ဒေသတွင်းက အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကြားမှာရှိနေတာက ပထ၀ီအနေအထားအရ မဟာဗျူဟာအချက်အချာကျပြီး အလွန်အရေးပါတဲ့ ကုန်းမြေတံတားကြီး အနေအထားမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဆင်မြူရယ်ဟန် တင်တန်ရဲ့အမြင်အရဆို ဟိန္ဒူဝါဒ၊ ဗုဒ္ဓ၀ါဒနဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ်အယူအဆတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုပြတ်ရွေ့ကြောကြီးပေါ်မှာ ခွ ထိုင်ထားတဲ့ တိုင်းပြည် ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပထ၀ီအနေအထားအရ အင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ သ ဘောပါ။ စစ်အေးခေတ်တလျှောက်လုံးမှာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကစတဲ့ ဗိုလ်နေ၀င်းကြီးစိုးတဲ့ စစ်အစိုးရအပါအ၀င် လွတ်လပ်ရေး အစိုးရ အဆက်ဆက်က ဘက်မလိုက်ကြားနေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝါဒကို တသမတ်တည်း ဆွဲကိုင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ် တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်သူလူထုရဲ့ အထွေထွေ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးအပြီးမှာ အာဏာထပ်သိမ်းလိုက် တဲ့ ဗိုလ်စောမောင်နဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေ ဦးဆောင်တဲ့ စစ်အစိုးရ တက်လာကတည်းက ဘက်မလိုက် ဆက်ဆံရေးမူဝါဒကို စွန့် ပစ်ပြီး တရုတ်အစိုးရနဲ့ပဲ တဖက်သတ် ဆက်ဆံလာရတဲ့ အခြေအနေဟာ ဒီကနေ့ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဘောင်းဘီချွတ် ဗိုလ် ချုပ်များရဲ့ အစိုးရလက်ထက် အထိပါပဲ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကလည်း ဆိုဗီယက် ယူနီယံပြိုကွဲအပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက တကိုယ်တော်စူပါ ပါဝါ ဖြစ်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့အင်အားချိန်ခွင်လျှာ အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အစီအစဉ် တွေကလည်း အမေရိကန်အကျိုးစီးပွားတွေ၊ တန်ဘိုးတွေနဲ့ တဆက်တစပ်တည်းဖြစ်လာနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေလည်း ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်၊ တရုတ်အစိုးရကလည်း အရင်ကိုင်ဆွဲထားတဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီချင်း ဆက်ဆံရေးမူဝါဒကို စွန့်လွှတ်ပြီး အစိုးရချင်း ဆက်ဆံရေး မူဝါဒကိုပြောင်းပြီး အာဏာရစစ်အစိုးရနဲ့ပဲ ပြောင်းလဲဆက်ဆံလာတဲ့ အချိန်ကာလတွေ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီလိုအခြေအနေတွေအောက်မှာ နေပြည်တော်နဲ့ ပီကင်းဆက်ဆံရေးအနေအထားတွေကြောင့် ဒေသတွင်းကတချို့နိုင်ငံ တွေ အထူးသဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ သူ့ရဲ့အရှေ့ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အလေးထားတဲ့ အရှေ့ကြည့် (Look East) ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာ မူဝါဒအပြောင်းအလဲတွေကို ချမှတ်လုပ်ဆောင်လာရတဲ့ အခင်းအကျင်းအနေအထားတွေ ရောက်လာပါတယ်။
သေချာတာကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ခံကတုတ်လုပ်ပြီး ကာလုံကြိုးကိုင်ထားတဲ့ စစ်အုပ်စုအစိုးရက တော့ သူတို့ ရှင်သန်ဖို့အတွက်ဆို ဘယ်လိုနိုင်ငံတကာ ဖိအားမျိုးကိုမဆို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘာမဆို လုပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ ကြောင့်လည်း ဘယ်သူသေသေ ငတေမာပြီးရောဆိုတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ခေတ်အဆက်ဆက်ပေါ်လစီတွေအောက်မှာ တ ရုတ်စီးပွား ရေးလုပ်ငန်းတွေ နေရာတကာမှာ တမိုးလုံဖျောက်ဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။ တရုတ်အစိုးရကလည်း ဒေသတွင်း မဟာဗျူဟာ အခင်းအကျင်းလိုအပ်ချက်အရ မြန်မာပြည်အပေါ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးထားနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေမှာ ဖြစ် သလို ကမ္ဘာ့အလည်မှာ အထီးကျန်ဖြစ်နေတဲ့ ကာလုံစစ်အုပ်စုဖက်ကလည်း သူတို့ အာဏာဆက်လက်တည်မြဲဖို့အတွက် မိတ်ဖက်ရှာရင်း အားယူရင်းနဲ့ တရုတ်အစိုးရအပေါ် တစတစ မှီခိုရတဲ့ကိန်း ဆိုက်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒီအခြေအနေတွေအောက် မှာ ပြည်သူတွေကို အပေါ်ယံဟန်ပြ ဒီမိုကရေစီပေးသယောင် လှည့်စားနေပြီး အမည်ခံ အရပ်သားအစိုးရ တဖြစ်လဲ စစ် အုပ်စုကြီးစိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သာ ဆက်လက် သက်ဆိုးရှည်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ဟာ တရုတ်ပြည်အ ပေါ် မှီခိုနေရတဲ့ တရုတ်ပြည်ရဲ့သြဇာခံနိုင်ငံအဆင့် ကျရောက်မယ့် အလားအလာတွေ တစတစ များလာနေပါတော့ တယ်။
တနည်းပြောရရင် မြန်မာပြည်ဟာ စစ်တပ်ကျောထောက်နောက်ခံ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတဖြစ်လဲ စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေ ကြီးစိုးနေမှုကို မဖယ်ရှားနိုင်ဘဲ အပေါ်ယံ ဒီမိုကရေစီ ဗန်းပြနေတာတွေပဲ သက်ဆိုးရှည်နေခဲ့ရင်တော့ ၁၉ ရာစုခေတ်က ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ရဲ့နယ်တနယ် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ တိုင်းပြည်ဟာ ၂၁ ရာစုခေတ်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသတွင်းမဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက် စီမံကိန်းထဲက နယ်ရုပ်ကလေးတရုပ်အဆင့်သာ ဖြစ်လာပြီး ရေ ရှည်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်အမျိုးသားလက္ခဏာ (National Identity) တစတစ ပျောက်ကွယ်လာမယ့် အန္တရာယ်ကို မလွဲမ သွေ ကြုံတွေ့ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂
၁။ ASEAN-India Connectivity: A Myanmar Perspective
၂။ ERI Website
၃။ DISCUSSION PAPER No. 66: Myanmar’s Economic Relations with China: Can China Support
the Myanmar Economy? Toshihiro KUDO* July 2006
၄။ Burma’s Economy 2010: A Fresh Look at Some Elemental Issues , September 2010, By Sean TURNELL
၅။ Economic and Military Cooperation between China and Burma By Nyi Nyi Lwin
၆။ Internet News
၇။ BURMA’S CHINA CONNECTION AND THE INDIAN OCEAN REGION By Andrew Selth: September 2003
(share : Black Angel facebook)
Posted by myu shadan at 11:25 PM No comments:
ရွှေညောင်တောင်လေးလုံးထောင်- ဗျူဟာမှုး ဗိုလ်မှုးကြီးဝင်းညွန့်နှင့် ဒုတပ်ရင်းမှုး ဗိုလ်မှုးကျော်သက်ခိုင်
ပန်းကန်ရဲဘက်စခန်း- ဗိုလ်မှုးနန္ဒကျော် နှင့် ဗိုလ်မှုးကျော်မြင့်ထွန်း
ထီးခန်းရဲဘက်စခန်း- ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီးစိုးမင်းလတ်နှင့် ဒုတိယဗိုလ်မှုးကြီး ၀င်းမင်းညွန်
Posted by myu shadan at 11:07 PM No comments:
ဆေးရုံရောက် ကားဆရာ စိုင်းသား
“တံတားစောင့်တာဝန်ကျတာက ခလရ ၆၄ ပေါ့။ ဗင်ကားမောင်းတဲ့ စိုင်းသားကို သေနတ်ဒင်နဲ့ထုတာက ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇော်။ နောက်ကျကြေးအတွက် ပိုက်ဆံ တစ်သောင်းကျပ်တောင်းတယ်။ စိုင်းသားက ငါးထောင်ဘဲကျန်တယ်။ ငါးထောင် ဘဲပေးပါရစေလို့ တောင်းပန်ပြောတာကို မခန့်လေးစားပြုတယ်။ သူပုန်ကိုတော့ ထောက်ပံ့ကျွေးမွေးပြီး ဗမာ့တပ်မတော်ကို ကျတော့ စေတနာမရှိဘူးဘာညာကြိမ်း မောင်းပြီးတော့ ရိုက်နှက်တာ။ အခု စိုင်းသားတယောက်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေရတယ်” ဟု လဲချားမြို့ခံ လင်းယဉ်ယဉ်က ပြောသည်။
ယခုလ ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခွဲက လဲချားမြို့အဝင် ခိုမလန်း (နမ့်တိန်းချောင်းကူးတံတား) ဂိတ်စောင့် မြန်မာစစ်တပ် ခလရ ၆၄ မှ ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးဇော်က ရပ်ကွက် ၁ ဟော်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်သည့် ဗင်ကားဆရာ စိုင်းသားအား တားဆီးရိုက် နှက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုက်နှက်မှု ဒဏ်ရာဖြင့် ဆေးရုံရောက်နေသော ကားသမားစိုင်းသားအား အဆိုပါ တပ်ရင်းဗိုလ်ကြီးက လာရောက် တောင်းပန်ရာ သတင်းမပေါက်ကြားစေလိုကြောင်း၊ အာမခံချက်အနေဖြင့် လက်မှတ်ထိုး ပေးစေလိုကြောင်း တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု ဆို၏။
ယင်းကိစ္စအပေါ် လဲချားမြို့မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် စိုင်းကျော်ဇေယျက “စိုင်းသားကလက်မှတ်မထိုး ပေးဘူး။ သူသာ စတင်ထိုးကြိတ်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ တမိသားစုလုံး ရွာမှာနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး လို့ပြောတယ်။ တကယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို လုပ်ရပ်တွေက မရှိသင့်တော့ဘူးပေါ့။ အခုလို ဒီမိုကရေစီကို ဦးတည်နေတဲ့အချိန်မှာ ပြည်သူတွေ ပါဝင်လာဖို့ စည်းရုံးနေရမယ့် အချိန်ဖြစ်လို့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို ပြည်သူကိုယဉ်ကျေးပြရမဲ့ အချိန်ပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား။ လက်နက်ကိုင်ဆိုတာ ပိုအရေးကြီးတဲ့ နေရာမှာရှိရမယ်လေ။ ဒီလိုလက်နက်ကိုင် တွေကြောင့် နှစ် ၆၀ လောက် ခါးကော့အောင် ပြည်သူတွေ အမျိုးမျိုးခံစားလာခဲ့ရပြီလေ” ဟု ပြောဆိုသည်။
လူထု စားဝတ်နေရေး အတွက် အခက်အခဲမဖြစ်အောင် အဆိုပါတံတားပိတ်ချိန် ၆ နာရီ အားထပ်မံနောက် ဆုတ်ပေးရန် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်သူ လဲချားမြို့သို့ရောက်ရှိစဉ် လဲချားမြို့မှ လွှတ်တော်အမတ်တဦးက တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ဖူးသော်လည်း ယနေ့တိုင် ထူးခြားမှုမတွေ့ရသေးကြောင်း လဲချားဒေသခံ လင်းယဉ်ယဉ်က ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
Posted by myu shadan at 10:50 PM No comments:
၎င်းသည် နေပြည်တော်တွင် မြန်မာအစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံကာ မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ MICT (Myanmar Information and Communication Technology) ဝင်း၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု မြန်မာ ကွန်ပျူတာအသင်း အတွင်းရေးမှုးချုပ် ဦးဇော်မင်းဦး က ပြောကြားကြောင်း The New York Times က ဖေါ်ပြသည်။
ချမစ်သည် အာရှဒေသတွင်း Google စီးပွားဖက်များ၊ အာရှတဝှန်းမှ သန်းပေါင်းများစွာသော သူများအတွက် အွန်လိုင်းမှ ကမ္ဘာ့ သတင်းအချက်အလက်များကို လာမည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဝင်ရောက် ရယူနိုင်ရန်အတွက် Google သုံး၍ ပံ့ပိုးပေးနေကြသူများကို ဆက်သွယ်ရန် အာရှနိုင်ငံအချို့သို့ ခရီးလှည့်လည် လျက်ရှိသည်ဟု Google ၏ ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလတွင် Google ဥက္ကဌသည် တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် ကာ အာရှတွင် ဈေးကွက်သစ် လေ့လာရှာဖွေခဲ့သည့်အပြင် ဇန်နဝါရီလ အတွင်းကလည်း မြောက်ကိုရီးယားသို့ အငြင်းပွားဖွယ် ခရီးစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် သွားရောက်ခဲ့သေးသည်။
ယခု မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ် ပြီးလျှင် အိန္ဒိယသို့ သွားရောက်ရန်ရှိသည်။ ၎င်း၏ခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ ကဏ္ဍတွင် လျှင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေမှု၏ နောက်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်သောခြေ လှမ်းတရပ် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် လက်ရှိအချိန်၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်နှင့် မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တယ်လီဖုန်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လေးခု အတွက် ကုမ္ပဏီ ၉၀ ကျော် တင်ဒါလျှောက်ထားခဲ့သည်။
ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမည့် အလားအလာ မျှော်လင့်ချက်က Google ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်
ဈေးချိုသည့် စမတ်ဖုန်းများ ရောင်းချခြင်းဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်အတွင်း ဝင်ရောက်လာကြမည်ဟု သုတေသီများက ယုံကြည်နေကြသည်။
Posted by myu shadan at 10:49 PM No comments:
ဆောင်းပါး	- မဇ္ဈိမသတင်းဌာန
လက်ပံတောင်း ကြေးနီ စီမံကိန်း ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်မှုများ မှာ အစိုးရတရပ် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့ ဖြစ်နေသဖြင့် တစုံတရာ မှားယွင်းနေပါ သည်။
တကယ်တမ်းတွင် ကြေးနီ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်၏ တာဝန်မှာ အချက်အလက်များ ရှာဖွေရန်သာ ဖြစ်ကာ အစိုးရတရပ်ကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရန် မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကဲ့သို့ အစိုးရတရပ်ကို ဦးဆောင်နေသူ တဦး မဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟုရှင်းလင်း ပြောပြရုံဖြင့် စိတ်ထိခိုက်နေသော ရွာသူရွာသားများက သဘောတူ လက်ခံလာလိမ့်မည်ဟု ဒေါ်စုအနေဖြင့် မျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရွာသားများက ငဲ့ကွက်ပေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် ကော်မရှင် အနေဖြင့် အကြံပြုချက်များ ပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် အရာရာတွင် ကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များ အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်ဟု တော့ တထစ်ချ ယူဆ၍ မရပေ။ သို့ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ အကန့်အသတ် ရှိနေမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး လုပ်ငန်းများ စတင်သည့် အချိန်ကတည်းက ရွာသားများ သေသေချာချာ သဘောပေါက်စေရန်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ကော်မရှင်၏ အပြီးသတ် အစီရင်ခံစာ ထွက်လာသည့်အခါ ထိုအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သတ်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ချဉ်းကပ် ဆောင်ရွက်ပုံအပေါ် ရွာသားများ စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပုံ ရပါသည်။ ၎င်းတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စီရင်ဆုံးဖြတ်သူ (decision maker) တယောက်ကဲ့သို့ သဘောထားလိုက် ကြသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကလည်း မိမိကိုယ်ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချသူ တဦးသဖွယ် သဘောထား၍ ရွာသားများကို တုံ့ပြန်ပြောဆိုသကဲ့သို့ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအား အသက်ရှူပေါက် ရသွားစေခဲ့ သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပျက်စီးသွားသည့် အခြေအနေများကို ကုစားရန် အတွက်သေချာစွာ တွေးတော ဆောင်ရွက်ရပေတော့မည်။ အများပြည်သူက ဒေါ်စုအပေါ် ထင်မြင်နေသည့် ပုံရိပ် ထိခိုက်သွားနိုင်သလို ဒေါ်စု အနေဖြင့်လည်း သူ၏ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိရန်မှာ ကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှု တခု ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေပါက သူ့အတွက်လည်း အကျိုးရှိလိမ့် မည် မဟုတ်ပေ။ တောင်ကို မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆက်လည် တည်ရှိနေစေချင်ရသည်လဲ ဟုမေးမြန်း လိုက်ခြင်း သည် ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်၏ ပုံရိပ်ကို အထိခိုက်နိုင်ဆုံးသော စကားတရပ်ဖြစ်ကာ ထိုကဲ့သို့မေးမြန်း လိုက်ခြင်း အားဖြင့် ဒေါ်စုနှင့် ရွာသူရွာသားများကြားတွင် များစွာ ကွာဟသွားစေခဲ့သည်။
ဒေါ်စုအနေဖြင့် နှလုံးသားထက် ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေး၍ ပြောဆိုနေသည်မှာတော့ ထင်ရှားပါသည်။ ကြေးနီး စီမံကိန်း ကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေးကို အထောက်အကူ ပြုလိမ့်မည်ဟုရှင်းလင်း ပြောပြ ရုံဖြင့် စိတ်ထိခိုက်နေသော ရွာသူရွာသားများက သဘောတူ လက်ခံလာလိမ့်မည်ဟု ဒေါ်စုအနေဖြင့် မျှော်လင့်ခဲ့ပါ သလား။ တရုတ်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ရွာသားများက ငဲ့ကွက်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ပါသလား။
ဒေါ်စု အနေဖြင့် ရွာသူရွာသား ၃၀၀ ခန့်ကိုသာ ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူ နိုင်ငံအနှံ့မှ ရွာသူရွာသား သန်း ၄၀ ခန့်က ဒေါ်စု၏ အသံကို နားထောင်ကြပေမည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူသည် လူအများ ထောက်ခံမှုကို ရှာဖွေနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်းထပ်တလဲ လဲ ပြောကြားခဲ့သော်လည်း ရွာသားများ၏ အမျက်ဒေါသကတော့ ပြေပျောက်မသွားခဲ့ပေ။ ထို့ပြင် အားလုံးကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရမည့် သူများမှာလည်း ရွာသူရွာသားများသာ ဖြစ်ကြသဖြင့် ဒေါ်စုတွင် ပြောပိုင်ခွင့် ရှိသည့် ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပေ။
ဒေါ်စုက သူသည် နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်အတွက် ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အများပြည်သူများ ကိုယ်တိုင်သည် လည်း နိုင်ငံ၏ အနာဂတ်ပင်ဖြစ်၍ လျစ်လျူရှု၍ မရပေ။
ဒေါ်စု အနေဖြင့် ရွာသူရွာသား ၃၀၀ ခန့်ကိုသာ ပြောဆိုနေခြင်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း လက်တွေ့တွင်မူနိုင်ငံအနှံ့မှ ရွာသူရွာသား သန်း ၄၀ ခန့်က ဒေါ်စု၏ အသံကို နားထောင်ကြပေမည်။
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ရှုထောင့်မှာ ဆိုပါလျှင် တောင်တန်းများနှင့် သစ်တောများ မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ လှပသောနိုင်ငံသည် ဆာဟာရ ကဲ့သို့ ကန္တာရ တခုအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားနိုင်သလို ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းမှ Isarn ဒေသတွင် လည်း သစ်တောများကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်းကာ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသောကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ပြီး ရေရှည်တွင် ဒေသခံများ စီးပွါးပျက်ကြသောကြောင့် ဒေသတွင်းမှ ဆင်းရဲသားများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ သမီးများကို ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများတွင် ထိုးအပ်လိုက်ရသည်အထိ အခြေအနေ ဆိုးခဲ့ရသော ဥပမာကလည်း ရှိနေပြန်သည်။
ထို့ပြင် လက်ပံတောင်း ကိစ္စအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိပါက တနိုင်ငံလုံးတွင် အခြေအနေများ ပေါက်ကွဲထွက်ကာ လယ်ယာမြေများ အသိမ်းခံရသည့် လယ်သမားများ ပါဝင်သည့် အုံကြွမှုမျိုးလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပေသည်။ ထို လယ်သမားများ အနေဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန် နေကြမည် ဖြစ်သလို အချို့မှာဆောက်တည် ရာမရဖြစ်နေနိုင်ပေသည်။ ထိုသို့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှ တဆင့် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ အခြေအနေမျိုး တခုပြီးတခု ဖြစ်ပေါ် လာမည်ဆိုလျှင် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မည်သည့်အဖြစ် အပျက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် သည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြပေမည်။
ထို့ကြောင့် သက်ဆိုင်သူများ အနေဖြင့် နီးကပ်သော အနာဂတ်ကိုလည်း ထည့်တွက်သင့်သည့်အပြင် စီးပွါးရေး ရှုထောင့် မှသာမက နိုင်ငံရေး ရှုထောင့်မှလည်း စဉ်းစားသင့်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးပမ်း ရယူထားရသည့် အရာများ အလွယ်တကူ ဆုံးရှုံးသွားရသည့် အဖြစ်မျိုး မဖြစ်သင့်ပေ။ ။
(မြတ်သူပန် သည် မြန်မာ့ မျက်မှောက်ခေတ် နိုင်ငံရေး၊ လူမှု စီးပွါးရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သတ်သော အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာများကို လေ့လာနေသူ တဦးဖြစ်သည်။)
Posted by myu shadan at 10:45 PM No comments:
“မနေ့က ၁၁ နာရီ လောက်ပေါ့ ကျိုင်းတုံကိုရောက်လာတာ။ လောလောဆယ်တော့ သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် သူ့ကိုဘယ်မှာ ထားတယ်ဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေ မပြောပြသေးဘူး။ နေပြည်တော် သို့မဟုတ် ရန်ကုန်မှာ သွားထားမယ်လို့လည်း သတင်းတွေ ထွက်နေတယ်၊ သူ့မိသားစုကော ခေါ်မယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု စိုင်းအောင်မြတ်၏ မိတ်ဆွေတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်အား ပြောသည်။
ယမန်နှစ် ဩဂတ်စ်လ က ကျိုင်းတုံ-မိုင်းလားလမ်းမှ တရုတ်ပြည်သို့ နိုင်ငံတော်သက်သေအဖြစ် ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်အစိုးရမှ စိုင်းနော်ခမ်းအား သေဒဏ် အပစ်ပေးပြီးနောက် ၂ ပတ်အကြာ မတ်ခ်ျလ ၁၇ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့၌ ကျိုင်းတုံမြို့သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“နေပြည်တော်ကနေ လာတဲ့ စရဖအရာရှိ ကျိုင်းတုံကိုရောက်လာတယ်။ မိုင်းလားဘက်ဆက်တက်သွားပြီး စိုင်းအောင်မြတ် ကိုသွား ကြိုတာလေ။ သူအသွားတုန်းက လမ်းအတိုင်းဘဲ ပြန်ပို့တာ၊ တရုတ်ရဲတွေလဲ မိုင်းလားအထိလာပို့တယ်” ဟုလည်း ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ တဦးကပြောသည်။
စိုင်းအောင်မြတ်သည် စိုင်းနော်ခမ်းအဖမ်းမခံရခင် ၁၀ ရက်အလို ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နောက်လိုက် ၂၅ ယောက်နှင့်အတူ တာချီလိတ်၌ လက်နက်ချခဲ့သည်။ စိုင်းနော်ခမ်းအမှု၌ စိုင်းအောင်မြတ်အား နိုင်ငံတော်သက်သေအဖြစ် စစ်ဆေးရန် တရုတ်ကတောင်းဆိုသဖြင့် မြန်မာအစိုးရ မှ တရုတ်အစိုးရထံသို့ ကျိုင်းတုံ၌ အခမ်းအနားအဖြင့် ၂၀၁၂ ဂျူလိုင်လ ၂၈ ရက် မနက် ၄ နာရီ က လွှဲအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ကျိုင်းတုံ - မိုင်းလားလမ်း မှတဆင့် တရုတ်နယ်စပ် ဖြတ်သန်းကာ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
စိုင်းနော်ခမ်းကိုလည်း တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့အစိုးရက မတ်လ ၁ ရက်နေ့က သေဒဏ်ပေး လိုက်ပြီး ၂ ပတ်အကြာ ဆွေမျိုးမောင်နှမများက တာချီလိတ်မြို့နယ် ပါမိတ်ရပ်ကွက်တွင် (စိုင်းနော်ခမ်း၏ အလောင်းအစား ၎င်း၏ အဝတ်အစားများ အသုဘ အခေါင်းထဲထဲ့၍) ၎င်း၏ဓါတ်ပုံဖြင့် အသုဘအခမ်းအနား ကျင်းပပေးခဲ့ရာ သတင်းထောက်များနှင့် အစိုးရစစ်တပ်ပိုင်းမှ လာရောက်မေးမြန်းမှုများကြောင့် အသုဘ ၇ ရက်ထားမည့် အစီအစဉ်အား ဖျက်လိုက်ပြီး အလောင်းမဲ့အခေါင်းကို ၃ ရက်မြောက်နေ့၌ မီးသဂြိုဟ်လိုက်ရကြောင်း နီးစပ်သည့်ဆွေမျိုးတဦးက ပြောဆိုသည်။
စိုင်းနော်ခမ်းအား မဲခေါင်မြစ်အတွင်း တရုတ် ၁၃ ဦး သတ်ဖြတ်ရာတွင် အမိန့်ပေးသူအဖြစ် စွပ်စွဲခံရ သော်လည်း တရုတ် အစိုးရ ဆေးထိုးသတ် သေဒဏ်ပေးလိုက်သည်အထိ အမှုဝန်ခံသွားခြင်းမရှိပေ။ ၎င်းအလောင်းအား မြန်မာသို့ ပြန်ပို့ ပေးမည်ဟု တရုတ်အစိုးရက ပြောဆို ခဲ့ဘူးသော်လည်း မြန်မာအစိုးရ ဘက်မှ အရေးယူပြောဆိုမှုမရှိသဖြင့် အလောင်းအား ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမရှိကြောင်း ၎င်း၏ဆွေမျိုးဘက်မှ တောင်းဆိုခြင်းလည်းမရှိခဲ့ကြောင်း နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောဆိုသည်။
Posted by myu shadan at 10:43 PM No comments:
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း KIA ဒေသအတွင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်နေဆဲ
သတင်း	- ကချင်သတင်းဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA) တပ်မဟာ (၄) ဒေသ တပ်ရင်း ၃၄ နယ်မြေ၌ ယမန်နေ့ နေ့လည် ၁၁ နာရီခန့်က အစိုးရတပ်နှင့် KIA အကြား ၁၅ မိနစ်ကြာ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မန်တုန်မြို့ (Man Dung) အခြေစိုက် အစိုးရ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ ၁၃၀၊ ၁၀၅ နှင့် ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ ၅၀၂၊ ၅၀၃ စသည့် တပ်ပေါင်းစု အဖွဲ့မှ တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား (၇၀) ကျော်နှင့် မိုးမိတ်မြို့နယ် မန်ယောန်(Man Yawn)ကျေးရွာ အနီး ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့် နှစ်ဖက် ထိခိုက်ကျဆုံးမှုကို မသိသေးကြောင်း KIA တပ်မဟာ(၄) မှ အမည်မဖော်လိုသည့် အရာရှိ တဦးက ပြောဆိုသည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့ကလည်း မိုးမိတ်မြို့နယ် လွယ်ယား ကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကျေးရွာအတွင်း လက်နက်ကြီး ကျည်များ ကျရောက် ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ဘက်ကတုန်ကြီး(Tung Gyi) ဘက်ကို တက်သွားဖို့ ရွာကနေဖြတ်သွားတဲ့အချိန် လမ်းမှာ ခဏ ထမင်းချက်စားနေတုန်း အစိုးရတပ်တွေပစ်လာလို့ အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ကြတာ။ အစိုးရတွေ ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီး လွယ်ယားရွာက အိမ်တစ်အိမ်မှာကျပြီး အိမ်မီးလောင်သွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်တို့ဘက်က ရွာမှာပိုဆိုးလာမှာစိုးလို့ အဲဒီနေရာကနေ နောက်ဆုတ်လိုက်တာ ရှောင်လိုက်တာ။ အဲဒီနောက်တော့ သူတို့ရွာကိုဝင်ပြီး အိမ် ၅ အိမ်ကို မီးပြန်ရှို့လိုက်တယ်။ ဒီနေ့ပစ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ရွာကိုပြန်ထိလာမှာစိုးလို့ ပြန်ရှောင်ထားလိုက်တယ်။”
အလားတူ လွန်ခဲ့သည့် မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် ကွတ်ခိုင်မြို့ အခြေစိုက် အစိုးရ၏ ခြေလျင်တပ်ရင်း ခလရ (၂၄၁) တပ်ဖွဲ့များနှင့် KIA တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့တို့ ဟူးဖြတ်၊ မန်ပိန်း ကျေးရွာအနီး (၂) နာရီခန့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ကချင်ပြည် လွပ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO နှစ်ဖက် ကိုယ်စားလှယ် တို့ မတ်လ (၁၁) ရက်နှင့် (၁၂) ရက်နေ့များက ရွှေလီမြို့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ရာ လွယ်ယားကျေးရွာမှာ အိမ်ထောင်စု (၆၀) ခန့်က တောင်ယာ၊ လယ်ယာနှင့် တောတောင်များအတွင်း ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်း သိရသည်။
လောလောဆယ် မန်တုန်အခြေစိုက် ခလရ ၁၃၀ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ကျောက်မဲအခြေစိုက် စကခ(၁) လက်အောက်ခံ ခမရ ၅၀၂၊ ၅၀၃၊ ၅၀၄၊ ၅၀၅၊ ၅၀၆ စသည့် တပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၅၀၀ ခန့်က ယင်းဒေသအတွင်း လှုပ်ရှားနေကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 10:41 PM No comments:
ဗန်းမော်မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနားကားလမ်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ ဗန်းမော် စကခမှူး၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဆွေနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြစ်ကြီးနားသို့ ခရီးသည်တင် ကားငယ် ၅ စီးနှင့် နမ့်ဆန်သို့ ၂ စီး စတင် ထွက်ခွာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့က မနက် ၈ နာရီခွဲလောက် ထွက်သွားကြတာ ညနေ ၆ နာရီခွဲလောက်မှာ မြစ်ကြီးနားကို ရောက်တယ်။ ဒီနေ့ မနက် ဗန်းမော်ကို ပြန်ဆင်းလာနေပါပြီ။ ဒီမနက်လည်း ဗန်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကား ၅ စီး တက်သွားပါတယ်။ လမ်းမှာ တံတားတွေ ပျက်စီးနေတာ ရှိပေမယ့် အခု ပြင်ဖို့ စလုပ်နေကြပြီ” ဟု ဗန်းမော်ခရိုင် မော်တော်ယာဉ်လိုင်းပေါင်းစုံ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် ကြီးကြပ်မှု ကော်မတီ (မ.ထ.သ) မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းများ ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး နယ်စပ် ကုန်သွယ်မှုမှာလည်း ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်ထဲက နယ်စပ်ပေါက်တွေက လုံးဝသုံးမရတော့လောက်အောင် ဖြစ်သွားတာ။ တရုတ်နဲ့ ကုန်သွယ်ဖို့က မူဆယ်တလမ်းထဲ ရှိတော့တဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းဘက်က လာတဲ့ ကုန်လည်း ဈေးကြီး၊ တရုတ်ဘက်က ကုန်လည်း ဈေးကြီးနဲ့ ကျမတို့ အတော် ဒုက္ခရောက်တာပါ။ လမ်းတွေ မြန်မြန် ပြန်ဖွင့်စေချင်တယ်” ဟု ဗန်းမော်ဒေသခံ ကုန်သည် တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ် အတွင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်သွယ်နိုင်သည့် နယ်စပ် ထွက်ပေါက်များအဖြစ် ကန်ပိုက်တီး၊ လိုင်ဇာ၊ မိုင်ဂျာယန်နှင့် ပန်ဝါ ဟူ၍ နယ်စပ်စခန်း ၄ ခု ရှိရာ၊ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ၂ နှစ်နီးပါး ကာလအတွင်း ကန်ပိုက်တီး စခန်းတခုကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ ကုန်သည်များက ပြောသည်။
“ဗန်းမော်- လိုင်ဇာ လမ်းပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုလည်း ကျနော်တို့ ၀န်ကြီးချုပ်ဆီ စာတင်မယ်။ မကြာခင်၊ ကျနော့်အထင် ဒီလကုန်ပိုင်း လောက်မှာတော့ ဗန်းမော်-လိုင်ဇာလမ်း ပြန်ဖွင့်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ အခု လမ်းကြောင်း အခြေအနေက အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ ဘာမှ အနှောင့်အယှက် မရှိဘူး။ လိုင်ဇာလမ်း ပြန်ပွင့်ရင်တော့ နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေး ပြန်ကောင်း လာမှာပါ” ဟု ဗန်းမော်ခရိုင် မ.ထ.သ မှ တာဝန်ရှိသူက ဧရာဝတီကို ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးတွင် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနှင့် ကုန်သွယ်မှုက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့်အတွက် တရုတ်-မြန်မာ ကုန်သွယ်ရေးသည် ပမာဏအကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့သည် တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အရေးကြီးသော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ထွက်ပေါက် တစ်ခုဖြစ်ကာ စစ်ဖြစ်ပွားစဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး မြစ်ကြီးနား-လိုင်ဇာ၊ ဗန်းမော်-လိုင်ဇာ ကားလမ်းများ ပိတ်ထားရသည့်အတွက် ကုန်သွယ်မှု မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။
Posted by myu shadan at 10:39 PM No comments:
Posted by myu shadan at 10:32 PM No comments:
ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှ အကယ်ဒမီ အခေါက် ရွှေတုံးများကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အစိုးရက လာမည့် ဧပြီလမှစတင်ပြီး အစိုးရ၀န်ထမ်းများအားလုံးကို လစာ ၂၀၀၀၀ ကျပ်တိုးမြှင့်ပေးမည်ဟု တရားဝင် သတင်း ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် ရွှေဈေးနှုန်းနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဈေးနှုန်းများ အတက်အကျ မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က တပ်မတော်သားများနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို လစာ၊ စရိတ်၊ နေ့စားလုပ်ခများကို ခေတ်ကာလ နှင့် အညီတိုးမြှင့် ပေးမည်ဖြစ်ပြီး တိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာကို ကျပ်ငွေ ၃၈၅ ဘီလီယံထိ သုံးစွဲ သွားမည်ဟု မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် အစိုးရအဖွဲ့ဘဏ္ဍာရေးကော်မရှင် အစည်းအဝေး တွင် တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆို ခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဦးဝင်းရှိန်က ၀န်ထမ်းအားလုံး လစာ ကျပ် ၂၀၀၀၀ တိုးမြှင့်ပေး မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ လစာတိုးမြှင့်သတင်းထွက်ပေါ်ပြီးနောက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့်ရွှေဈေးနှုန်းများမှာ အမြင့်ဆုံး ထိုးတက်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ အတက်အကျ မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းမြင့်က လစာတိုးမြှင့်မည်ဆိုသော သတင်းများ ထွက်ပေါ် လာချိန်က ရန်ကုန်ဈေးကွက်တွင် အခေါက်ရွှေတကျပ်သားလျှင် ၇၄၀၀၀၀ ၀န်းကျင်မှ ၇၅၅၀၀၀ အထိ အမြင့်ဆုံး ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမှာမူ ပြင်ပဈေးကွက်များတွင် အမေရိကန် တဒေါ်လာလျှင် ၈၉၅ ကျပ်အထိ အမြင့်ဆုံး တက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့တွင်မူ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမှာ တဒေါ်လာလျှင် ၈၈၂ ကျပ်နှင့် အခေါက်ရွှေ ဈေးမှာမူ တကျပ်သားလျှင် ၇၅၁၀၀၀ ဈေးပေါက်နေ ကြောင်း၊ လစာတိုးမည့်သတင်းကြောင့် ဈေးကွက်တွင် ရွှေနှင့်ဒေါ်လာ တန်ဖိုး အတက် အကျ ငြိမ်သက်မှုမရှိကြောင်း ပြောသည်။
“လစာတိုးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတော့ ရွှေနဲ့ဒေါ်လာတက်သွားခဲ့တယ်။ တကယ်တန်းလစာကလည်း တိုးသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအပေါ်မှာ ဈေးတက်မလားဆိုပြီး ဈေးကစားတာမျိုးတွေရှိတယ်။ တကယ်တန်းတော့ ပြည်တွင်းရွှေဈေးက ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး အတက်အကျပေါ်မူတည်တယ်။ ရွှေအ၀ယ် ကတော့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့က အ၀ယ်လိုက်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ ပြန်အေးသွားတယ်” ဟု ဦးဝင်းမြင့် က ဆိုသည်။
ပြင်ပဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိချိန်က ပုဂ္ဂလိကငွေလဲစင်တာများတွင် ဒေါ်လာအ၀ယ်သာလက်ခံပြီး ပြန်လည်ရောင်းချမှုမပြုတော့ဘဲ အရောင်းပိတ်ပင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်။
“ပြင်ပဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာဈေးတအားထိုးတက်တုန်းက ငွေလဲစင်တာတွေက အရောင်းပိတ်ပြီး အ၀ယ်ပဲ လက်ခံတယ်။ အခုတော့ ငွေလဲစင်တာတွေက ပြင်ပဒေါ်လာဈေးနှုန်းထက် ဒေါ်လာဈေးကို ပိုဖွင့်ပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်တယ်။ ဥပမာ- ပြင်ပဈေးကွက်မှာ အမေရိကန်တဒေါ်လာ ၈၈၂ ကျပ်လောက်ပဲ ပေါက်ရင် ငွေလဲစင်တာတွေက ဒေါ်လာဝယ်ချင်တဲ့သူကို တဒေါ်လာ ၈၈၅ ကျပ်လောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်။ ဒေါ်လာဝယ်တဲ့သူလည်း များတယ်။ အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းတယ် ပြောရမယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံခြားငွေလဲဒိုင်တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းက နိုင်ငံဝန်ထမ်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ဝင်ငွေ တစ်ဦးချင်း ဝင်ငွေကို နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဖော်ပြရာတွင် အမြင်ကောင်းစေရန်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများစေရန် တဒေါ်လာ ငွေလဲနှုန်း ၈၅၀ ကျပ် ဝန်းကျင်တွင်ထားရှိနေသလော၊ တဒေါ်လာ ၉၅၀ကျပ်နှင့် ၁၀၀၀ ကျပ် ထားရှိလျှင် နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူအတွက် အကျိုးရှိမည်ကို သိလျက်နှင့် မျက်ကွယ်ပြုနေသလောဟု ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောဆိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီး ယင်းပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်ချိန်မှ စတင်ကာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုး တအိအိမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
“ဖေဖော်ဝါရီတလလုံးက အမေရိကန်တဒေါ်လာကို ၈၅၀ နဲ့ ၈၅၅ အကြားမှာပဲ ဈေးက ငြိမ်နေခဲ့တာ။ သူရဦးရွှေမန်းက ဒေါ်လာတန်ဖိုး ဈေးကျ နေတဲ့ကိစ္စကို လွှတ်တော်မှာ ပြောပြီးလိုက်တော့ ဒေါ်လာဈေးတွေ တအိအိပြန်တက်တယ်။ နောက် လစာတိုးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်တော့ ဒေါ်လာက တဟုန်ထိုးတက်သွားတာ။ ရန်ကုန်ဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာဈေးတက်ပြီး အ၀ယ်လိုက်တော့ နယ်စပ်က ဒေါ်လာစီးကြောင်းက ရန်ကုန်ဈေးကွက်ထဲ ပြန်ဝင်လာတော့မှ ဒေါ်လာ ဈေးတက်တာ နည်းနည်းပြန်တုံ့ဆိုင်းသွားတာ” ဟု ရန်ကုန် ဈေးကွက်မှ နိုင်ငံခြားငွေလဲဒိုင်က ဆိုသည်။
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်တွင် ဒေါ်လာနှင့်ရွှေဈေးနှုန်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ ဈေးကစားမှု ကြောင့် အဓိက ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၊ ဘောဂဗေဒဌာန၏ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဒေါက်တာ မောင်မောင်စိုးကဆိုသည်။
“လစာတိုးမယ်ဆိုပေမယ့် လစာက တိုးသေးတာမဟုတ်။ ဧပြီလကုန်ကျမှ ၀န်ထမ်းတွေ တိုးတဲ့လစာကို စရကြမှာ။ လူတွေလက်ထဲ ငွေတောင် မရောက်သေးဘူး ရွှေဈေးတက်၊ ဒေါ်လာဈေးတက်ဖြစ်တာက အဓိက ဈေးကစားတာကြောင့် ဖြစ်တာ။ တကယ်တန်း တိုးတဲ့လစာ ၀န်ထမ်းတွေလက်ထဲ ရောက်လာရင်လည်း ဈေးတက်တာက ဖြစ်မှာပဲ။ တက်တဲ့ဈေး နဲ့ လူတွေရဲ့ ၀င်ငွေနဲ့ မျှနေရင်တော့ သိပ်ပြသနာမရှိဘူး” ဟု ဒေါက်တာမောင်မောင်စိုးက ရှင်းပြသည်။
ပြည်တွင်းတွင် မော်တော်ကားများ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်း ခွင့်ပြုနေခြင်း၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ လျော့ချနေခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအပါအ၀င် အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့် သွင်းကုန် တင်သွင်းရသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဦးမော့လာခြင်းတို့ကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမည်ဟု ရန်ကုန်စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းက သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။
ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် အများစုက အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့်မြန်မာငွေ တန်ဖိုးတွင် မြန်မာငွေတန်ဖိုးနှိမ့်ချပြီး ဒေါ်လာ တန်ဖိုး ဆွဲတင်ခြင်းဖြင့် မြန်မာ့ပို့ကုန် တင်ပို့မှု မြင့်တက်စေရေး အစိုးရက လုပ်ဆောင်ပေးသင့်သည်ဟု အစဉ်တစိုက် အကြံပြု တောင်းဆို လျက်ရှိသည်။
Posted by myu shadan at 10:28 PM No comments:
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် (SSA) တောင်ပိုင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခြေစိုက် လှုပ်ရှားနေသည့် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းထမြို့နယ်ခွဲရှိ လွိုင်မို့နန်းလျန်း တပ်စခန်း တနေရာကို ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထားပြီး ထပ်မံ ဆုတ်ခွာပေးရန် အစိုးရစစ်တပ်က အကြောင်းကြားထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်း လွိုင်မို့နန်းလျန်း တပ်စခန်းကို အစိုးရ တြိဂံတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဒု တိုင်းမှူး အဆင့်ရှိသူတဦးက ပြီးခဲ့သည့် တပတ်က ညွန်ကြားထားပြီး ၎င်းတို့၏ တပ်စခန်း အနီးအနားတွင် အစိုးရတပ် စစ်အင်အား တိုးချဲ့ထားကြောင်း SSA တောင်ပိုင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့ကလည်း ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း လင်းခေးခရိုင် ဟိုမိန်းမြို့နယ်ခွဲရှိ လွိုင်လျန်း တပ်စခန်းတခုမှ ဆုတ်ပေးရန် အကြောင်းကြားခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်သူ၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဆုတ်ပေးခဲ့ရသေးကြောင်း သိရသည်။
Posted by myu shadan at 10:20 PM No comments:
ကရင် တိုင်းရင်းသားများ အနာဂတ်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးတခုကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့ရှိ ဇွဲကပင် ဟိုတယ်တွင် ယခုလ ၂၉ နေ့မှ စတင်၍ ၂ ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU ) အဖွဲ့ဝင် ၂၀ နှင့်အတူ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် အခြေစိုက် ကရင်လူထု အခြေပြု အဖွဲများမှ ကိုယ်စားလှယ် ၅၀ ခန့် တက်ရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေး ဖြစ်မြောက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် စောလှထွန်းက ပြောသည်။ ယင်းအစည်းအဝေးကြီး ကျင်းပနိုင်ရေး အတွက် အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု ဥက္ကဌ ဦးအောင်မင်းက စီစဉ်ပေးကြောင်း သိရသည်။ ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များဖြစ်သည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA)၊ KNU/KNLA ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ၊ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်များလည်း တက်ရောက်မည်ဟု သိရသည်။
Posted by myu shadan at 10:17 PM No comments:
ယမန်နှစ်က ရန်ကုန်မြို့တွင် တွေ့ရသော ဦးခင်ညွှန့် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
အစိုးရ ရုပ်သံသတင်းတွေမှာ ပါလွန်းလို့ တချိန်က တီဗီမင်းသားလို့ လူပြောများတဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲဟောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွှန့်ကို အစိုးရရဲ့ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ် ဖန်သားပြင်တွေပေါ်မှာ ၁၀ နှစ်တာ ကာလအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အတွင်းက ပြန်လည် မြင်တွေ့ရပါတယ်။
အဆိုပါ ကျိုက်ဓနုတ် စေတီတော်ကြီးဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဇနီး ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင် ဦးစီးကာ ရွှေထီးတော်တင်လှူအပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ပြန်လည် ပြိုကျပျက်ဆီးခဲ့ပြီး စစ်သားများ အပါအ၀င် အရပ်သားတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၊ သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပေါ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီတုန်းက သေဆုံးသူ ၂၀ ကျော်နဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ ၁၅၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ နောက်ပိုင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပေမယ့် သေဆုံးသူများနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းအမှောင် ချထားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးခင်ညွန့်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၄ ခုနှစ်အတွင်း န၀တ၊ နအဖ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်မှာ အတွင်းရေးမှူး (၁)၊ နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ်၊ တပ်မတော် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအကြံပေး၊ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ စတဲ့ ထိပ်တန်းရာထူးတွေကို တာဝန်ယူခဲ့ဖူးပြီး ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုနီးပါးကြာ မြန်မာ့ ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ နေ့စဉ် နေရာယူခဲ့သူပါ။
Posted by myu shadan at 10:15 PM No comments:
ကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအချမ်းသာဆုံး သူဋ္ဌေးကြီး Warren Buffett ဘ၀ကိုရှုမြင်သုံးသပ်ပုံများ
၆) သူ့ရဲ့ Berkshire Hathaway ကုမ္မဏီက ကုမ္မဏီပေါင်း (၆၃) ခုကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကုမ္မဏီတွေက CEO တွေ ဆီကို သူက (၁)နှစ်ကို စာတစ်စောင်ပဲ ပို့ပါတယ်။ စာထဲမှာ လာမည့်နှစ်အတွက် ရည်းမှန်းချက်တွေကိုပဲ ရေးပေးလိုက် ပါတယ်။ အဲ့ဒါကလွဲလို့ သူတို့ဆီ ပုန်မှန်ဖုန်းဆက်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးလုပ်ခြင်းတွေ ဘယ်တော့မှ သူမလုပ်ပါဘူး။
(သင့်တော်တဲ့ လူကိုသင့်တော်တဲ့ နေရာပေးပါ။)
၇) အဲ့ဒီ CEO တွေကို စည်းကမ်းချက် (၂) ခုပဲထုတ်ထားပါတယ်။ စည်းကမ်းချက်(၁) သင့် ရှယ်ယာဝင်တွေရဲ့ ငွေ တွေကိုလုံးဝ မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။ စည်းကမ်းချက်(၂) စည်းကမ်းချက် (၁) ကို မမေ့ပါနဲ့။ (ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေ ချမှတ် ပါ၊ ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ် လူတွေ (လက်အောက်ငယ်သားတွေ၊) အာရုံစူးစိုက်တာ သေချာပါစေ။
၁၀) ကမ္ဘာ္ဘပေါ်မှာ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ Bill Gates က သူနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၅)နှစ်ကမှ တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Bill Gates က သူနဲ့ Warren Buffett ဘာမှ တူညီတာသိပ်မရှိဘူး (ပြောစရာ သိပ်မရှိဘူးထင်တာနဲ့) နာရီဝက်ပဲတွေ့ ဆုံဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါ တယ်။ တကယ်တမ်း တွေ့ဆုံတော့ တွေဆုံမှုဟာ (၁၀)နာရီအထိ ကြာမြင့်ပြီး Bill Gates ဟာ သူ့ကို အထူးချစ်ခင်လေး စားသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သွား ပါတော့တယ်။
Credit Card (ဘဏ်ချေးငွေ) တွေကို ဝေးဝေးကရှောင်ပြီး ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ရင်းနှီး မြှုတ်နှံပါ- မှတ်မိနေရမယ့်အရာတွေကတော့ . . . . .
(၆) ဘာပဲပြောပြော ဒါဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀ပါပဲ။ ဘာလို့ သူများတွေကို ထိန်းချုပ်ချယ်လှယ်ခွင့် ပေးရမှာလဲ။
(copied fr'yotethayyote via Richelle ko)
Posted by myu shadan at 8:13 PM No comments:
ယုဒသန် (ခရစ် ၁၇၈၈ -၁၈၅ဝ)။
ဆရာကြီးယုဒသန်သည် ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ ရောက်လာသော ခရစ်ယန် သာသနာပြု ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
ယုဒသန် ဟူသောအမည်မှာ မြန်မာတို့က ဂျပ်ဆင် ဆိုသောစကားလုံးကို အသံလှယ်၍ ခေါ်ဆိုသော အသံထွက်ဖြစ်ပြီး အမည်ရင်းမှာ အဒိုနီရမ်ဂျပ်ဆင် ဖြစ်လေသည်။
ယုဒသန်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကို စတင် တည်ထောင်သူ ဖြစ်သည်။ ယုဒသန်သည် မြန်မာနိုင်င့ ခရစ်ယန် သာသနာရေး ဖက်၌ သာမက စာပေဖက်၌သော်၎င်း၊ နိုင်ငံရေးဖက်၌သော်၎င်း ထင်ရှားကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လေသည်။
ယုဒသန်သည် ၁၇၈၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် မော်လဒင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၈၁၂ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် အန်ဟေဇယ်တိုင် နှင့် ထိမ်းမြားလက်ထပ်ခဲ့လေသည်။
နောက်တနေ့တွင် ယုဒသန်သည် အခြား ဖေါ်လေးဦးတို့နှင့်အတူ အရှေ့အာရှနိုင်ငံများသို့ သာသနာပြုရန် စေလွတ်ခြင်းခံရ၏။
ယုဒသန် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ဆေလမ်မြို့ ဆိပ်ကမ်းမှ သင်္ဘောဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လတွင် အိန္နိယနိုင်ငံ ကာလကတ္တားမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လေသည်။
ထိုအချိန်က ဗြိတိလျှ အစိုးရနှင့် အမေရိကန် အစိုရတို့သည် အချင်းချင်းမသင့်မတင့် ဖြစ်လျှက်ရှိရကား အိန္နိယနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေသည့် ဗြိတိလျှတို၏ အရှေ့အိန္နိယ ကုမ္မဏီသည် အမေရိကန်သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်များကို ထိုတိုင်းပြည်တွင် နေထိုင်ရန်မလိုလားချေ။ ထို့ကြောင့် အိန္နိယနိုင်ငံသရှိ ဘုရင်ခံချုပ်က ယုဒသန်နှင့်ဇနီးတို့ကို မိမိတို့စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့သော သင်္ဘောဖြင့် အမေရိကန်ပြည်သို့ပြန်ရန် အမိန့်ပေးလေသည်။ ထိုအခါ ယုဒသန်သည် ပြင်သစ်ပိုင် မောရစ်ရှပ်ကျွန်းသို့ ထွက်ခွာခဲ့ရသည်။
အိန္နိယနိုင်ငံတွင်ရှိနေစဉ် ယုဒသန်နှင့်သူ၏ဇနီးတို့သည် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယန်အသင်းသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြသည်။
ယုဒသန်သည် အရှေ့ အာရှနိုင်ငံများ၌ သာသနာပြုရန်ဟူသော မူလရည်ရွယ်ချက်ကို စွန့်လွှတ်ရမည်ကဲ့သို့အခြေအနေတွင်ရောက်ရှိနေခဲ့သော်လည်း ၁၈၁၃ ခုနှစ် ဇွန်လဆန်းတွင် အရှေဖက်သို့ ကြုံရာသင်္ဘောနှင့် မဒရပ်မြို့သို့ထွက်ခွာခဲ့ကြပြန်သည်။ တဖန် မဒရပ်မြို့မှ တဆင့် ဂျောဂျီးယားနားအမည်ရှိ သင်္ဘောဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လိုက်ပါလာခဲကြရာ ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သိုဆိုက်ရောက်လေသည်။
ထိုအခါက ရန်ကုန်သည် ယခုကာလ ရန်ကုန်နှင့် လုံးဝမတူချေ။ ဆူးလေစေတီတော်ကို အရှေ့ဖက်၊ အနောက်ဖက်နှင့် တောင်ဖက်တို့မှ အင်းကြီးတခုကာလျှက်ရှိသည်။ မြို့ကို အင်းကြီးနှင့် ချောင်းမြောင်း ထုံးအိုင်တို့ ဝန်းရန်လျက်ရှိသဖြင့် ကျွန်းကြီးကဲ့သို့ ဖြစ်လျက် ရှိသည်။ မြို့မြောက်မျက်နှာ ဝန်ကြီးတံခါးမှ ထွက်၍ ချောင်းကိုကူးပြီးလျင် ဝန်ကြီးလမ်း အတိုင်း ဆက်သွားပါလူ မိုင်ဝက်လောက် ခရီးတွင်နှစ်ခြင်းသာသနာပြုအိမ်ကြီးသို့ ရောက်လေသည်။ ယခုဘားလမ်း၏ မြောက်စွန်းအနီးတွင် ဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းဆရာ များက ဆိုသည်။ ထိုအိမ်ရှင်မှာ အိန္နိယနိုင်ငံ ဆာရမ်ပူမြို့ရှိ အင်္ဂလိပ် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယန်သာသနာပြု ဝီလျံကာရီ၏ သား ဖဲလစ်ကာရီ ဖြစ်သည်။ ထိုသာသနာပြုအိမ်၌ ယုဒသန်တို့ နေထိုင်ကြသည်။
ဟောရန် ပြောရန် သာသနာပြုရန် ရောက်လာကြသည်ဖြစ်သော်လည်း ယုဒသန်တို့သည် မြန်မာစကားကို တလုံးတပါဒမျှ မတတ်ကြ၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာစကားကို ဦးစွာ ကြိုးစားသင်ယူရသည်။ သိုဖြင့် သုံးနှစ် သုံးမိုး ရှိလာသောအခါ ယုဒသန်သည် မြန်မာသဒ္ဓြွါကျမ်းတစောင်ကို ရေးသားပြုစုပြီး လေ၏။ မြန်မာတို့ အကြားတွင် သာသနာပြုဖို့ရန် မြန်မာတို့၏ အယူဝါဒ အလေ့အလာ တို့ကိုလည်း နားလည်ရပေဦးမည်။ ထို့ကြောင့် ယုဒသန်သည် လောကုတ္တရာ စာပေများကို လေ့လာဆည်းပူးရာ၊ မြန်မာစကား ကဲ့သိုဖြစ်နေသော ပါဠိ၊ သက္ကတ စကားလုံးပေါင်း လေးထောင်လောက်ကို စုဆောင်းမိလေသည်။ ထိုစကားလုံး များကို အက္ခရာဝလိစဉ်၍ မြန်မာအနက် ပေးကာ ပါဠိ - မြန်မာ အဘိဓာန်ကို စတင်ပြုစုလေသည်။ ထိုအဘိဓာန်တွင် ပါသော မြန်မာ စကားလုံး များကို တဖန် အက္ခရာ ဝလိစဉ်ကာ အင်္ဂလိပ် အနက်ပေး၍ ပဌမမြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်ငယ်ကို ဆက်လက် ပြုစုပြန်သည်။
၁၈၁၆ ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားပြည်နယ် ဆရမ်ပူ သာသနာပြုကောလိပ်ကျောင်းက ပုံနှိပ်စက်တလုံးနှင့် မြန်မာခဲစာလုံးများကို လက်ဆောင်ပို့လိုက်သည်။ ပုံနှိပ်စက်နှင့်အတူ ဆရာဟောက် ဆိုသူ ပုံနှိပ်ပညာတတ် အမေရိကန်သာသနာပြုတဦးလည်း ရောက်လာသည်။ ၁၈၁၇ ခုနှစ်တွင် ယုဒသန်သည် ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်ကျမ်းကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပြီးစီးသည်။ ထိုအခါ ယုဒသန်သည် တရား ဟောနိုင်လောက်အောင် မြန်မာစကားတတ်ပြီဟု အယူရှိလေသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် မြန်မာတို့ တရားနာလေ့ရှိသော စရပ်များသို့သွားကာ ဓမ္မကထိကများ ဟောသည်ကို မြန်မာများနှင့်အတူ နာယူ၍ အတုယူနည်းမှည်းလေတော့သည်။ ထို့နောက် သာသနာပြုအိမ်ကြီးနှင့် မလှမ်းမကမ်း လူသွားလူလာများသောခရီးတွင် စရပ်တဆောင် ဆောက်လုပ်သည်။ စရပ်မျက်နှာစာခန်းကို ဝါး၊ ဓနိတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်၍ အကာအရံမရှိ ဟင်လင်းထားသည်။ ထိုအဆောင်တွင် ယုဒသန်ထိုင်၍ ခရီးသွားများကို တရားနာလာရန် ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိသည်။ ကလေးသူငယ် များကိုလည်း သစ်သား သင်ပုန်းကြီးများခင်း၍ စာသင်ပေးလေ့ရှိသည်။ ထိုစရပ်ကြီးတွင် ယုဒသန်တို့သည် တရားစဟောသည်။ ကျမ်းစာများကိုလည်း ဆက်လက်ရေးသား ပြန်ဆိုကာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလေသည်။
သို့ဖြင့် ဘကြီးတော်ဘုရား လက်ထက်သို့ ရောက်လာသောအခါ ဘုရင်မင်းမြက်ထံမှ တရားဟောပြောခွင့် အမိန့်တော်ကို ခံယူရန်လိုသဖြင့် အခြား သာသနာပြုတဦးဖြစ်သူ ဆရာကိုးလမင်းနှင့် အတူ နေပြည်တော်သို့ ၁၈၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဆန်တက် သွားကြလေသည်။ လမ်းခရီးတွင် တလကျော်ကြာပြီးနောက် အမရပူရမြို့တော်၌ ဘကြီးတော် မင်းတရားကြီးထံ အခစားဝင်ရောက်ခွင့်ရ၍ ယုဒသန်က သာသနာပြုခွင့်ရရန် လျောက်တင်လေသည်။ သို့ရာတွင် မင်းတရားကြီးက နှစ်သက်တော်မမူသဖြင့် အခွင့်မရဘဲ ရန်ကုန်သို့ စုန်ဆင်းခဲ့ရသည်။
ထိုအတော အတွင်း ယုဒသန်၏ ဇနီးမှာ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်း လျက်ရှိသဖြင့် ၁၈၂၁ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန် နိုင်ငံသို ပြန်လေသည်။ ထို့နောက် မျက်စိ ရောဂါနှင် နားရောဂါ တို့၌အထူး ကျွမ်းကျင်သော သာသနာပြု ဆရာဝန် ပရိုက်စ် ဆိုသူသည် ၁၈၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်လာသည်။ ၁၈၂၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ၂၈ရက်နေ့တွင် ဒေါက်တာပရိုက်စ်သည် အင်းဝမြို့တော်ရှိ ဘကြီးတော်မင်းတရားကြီးထံ အခစားဝင်ရောက်ရန် ဆန်တက်ရာတွင် ယုဒသန်လည်း စကားပြန်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ် လိုက်ပါသွား ပြန်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘကြီးတော် မင်းတရားကြီးသည် အင်းဝမြို့တော်သို့ ပြောင်းရွှေ့ စံနေတော်မူပြီ ဖြစ်၏။ တခါသော် ယုဒသန်သည် ဘကြီးတော် မင်းတရားရှေ့တွင် တရားဟော ပြောပြရလေသည်။ မင်းတရားကြီးက ယုဒသန်အား နေပြည်တော်၌ နေထိုင်ရန် မြေတကွက် ပေးသနားတော် မူသည်။ ဒေါက်တာပရိုက်စ် ကိုမူ စစ်ကိုင်းဖက်၌ နေအိမ်ဆောက် ခွင်ပေးလေသည်။
ထိုနောက် ယုဒသန် သည် ရန်ကုန်မြို့ သိုစုန်ဆင်းခဲ့သည်။ ၁၈၂၃ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် အန်း ဟေဇယ်တိုင်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ပြန်ရောက်လာသည်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ် ဇန္ခဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ယုဒသန် ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ဦးတို့သည် အင်းဝနေပြည်တော် သို့ ရောက်ရှိလာပြီးလျင် အိမ်တဆောင် ဆောက်လုပ် နေထိုင်ကြလေသည်။
ယုဒသန်သည် မြန်မာမှူးမတ် ဆွေတော် မျိုးတော်တို့နှင့် သင့်မြက်အောင် ပေါင်းသင်း၍ သူ၏ဇနီးက ကျောင်း တကျောင်းဖွင့်ကာ အပ်ချုပ် အတတ်နှင့် စာရေး စာဖတ် တို့ကိုသင်ကြား ပေးသည်။ ယုဒသန်သည် စတြာ မင်းကလေးခေါ် ညောင်ရမ်းမင်းသားထံ မပြတ်ခစားသည်။ ခဲပေါင်မြို့စား ဝန်ကြီး ဦးရွှေလူ၊ မြဝတီမင်းကြီးဦးစ နှင့် မက္ခရာ မင်းသားကြီးတို့ ထံတွင်လည်းဝင်ထွက် လေသည်။
ထိုအတောအတွင်း မြန်မာ အစိုးရနှင့် အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့သည် ရှင်မဖြူကျွန်း အရေးကြောင့် စစ်ဖြစ်ကြရာ ၁၈၂၄ ခုနှစ်မေလတွင် အင်္ဂလိပ်တို့က ရန်ကုန်မြို့ကို သိမ်းယူလေသည်။ ထိုအချိန်တွင် နေပြည်တော်၌ နိုင်ငံခြားသားတို့အား ထိမ်းသိမ်း စောင့်ကြပ်ထားရန်လိုအပ်သည့်အတိုင်း ယုဒသန်နှင့် ဒေါက်တာပရိုက်စ်တို့ကို ဖမ်းဆီး၍ လက်မရွံ ထောင်သို့ပို့ထားလေသည်။ အခြားသောအင်္ဂလိပ်လူမျိုးများလည်း ထိုနည်းအတူ အဖမ်းခံရသည်။ ၁၈၂၅ ခုနှစ် ဇန္ခဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ယုဒသန်ဇနီး၌ သမီးဖွားမြင်၍ မာရီယာဟု အမည်မည့်ခေါ်သည်။
ယုဒသန်တို့လူစုကို ထောင်ထဲ၌ ၁ဝ လ အကျဉ်းချထားပြီးနောက် အောင်ပင်လယ်ထောင်သို့ တဖန် ပြောင်းရွေ့ချုပ်နှောင်ထားလေသည်။ ဇနီးလည်း မိမိ၏ ခင်ပွန်းသွားရာ အရပ်သို့လိုက်လေသည်။ ထိုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင် ယုဒသန်အား ထောင်မှလွှတ်ရန် အမိန့်ရောက်လာသည်။ မလွန်မြို့အနီး ညောင်ပင်ဆိပ်စခန်းတွင် အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာတို့ စစ်ပြေငြိမ်းရေးအတွက် နှစ်ဦး နှစ်ဘက် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရာ၌ ယုဒသန်ကို စကားပြန်အဖြစ် စေလွတ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့တွင် အင်းဝသို့ပြန်ရောက်လာသည်။
ထို့နောက် ခဲပေါင်မြို့စား ဝန်ကြီးဦးရွှေလူ၏ ကူညီမှူဖြင့် ယုဒသန်သည် ၁၈၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ထောင်မှလွတ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ယုဒသန်၏ ဇနီးသည် အသည်းအသန်ဖျားနာလျက်ရှိသည်။ ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် ရန္ဓြွပိုစာချုပ် ချုပ်ဆိုသောအခါ၊ ယုဒသန်သည် စကားပြန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကာ အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာသို့၊ မြန်မာမှ အင်္ဂလိပ်သို့ ပြောသမျှ စကား၊ေါ်သမျှ စာတို့ကို ဘာသာပြန်ဆိုရလေသည်။ စစ်ပြေငြိမ်းသွားသောအခါတွင်ကား ယုဒသန်သည် အောက်ပြည်သို့စုန်၍ အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက်ဖြစ်သော ကျိုက်္ခမီမြို့တွင် နေထိုင်ကြသည်။
ယုဒသန်၏ ဇနီး အန်း ဟေဇယ်တိုင်သည် ၁၈၂၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်လေသည်။ ထိုအချိန်တွင် ယုဒသန်သည် ဗြိတိလျှ အစိုရကိုယ်စလှယ် ဂျွန် ကရောဖက်နှင့်အတူ အင်းဝမြို့တော်သို့ အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ကိစ္စဖြင့် ရောက်ရှိနေခိုက်ဖြစ်သည်။ ၁၈၂၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ယုဒသန်၏ သမီး မာရီယာသည်လည်း ကွယ်လွန်လေသည်။
ယုဒသန်ပြန်ဆိုသော ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ၁၈၃၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မော်လမြိုင်မြို့၊ သာသနာပိုင်ပုံနိုပ်တိုက်၌ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရိုက်နှိပ်ခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုလည်း ဆက်လက်ပြန်ဆိုခဲ့ရာ ၁၈၃၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ပုံနိုပ်ပြီးစီးလေသည်။ ဦးစွာ ယုဒသန်၏ အကြံမှာ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်နှင့် မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန် နှစ်စောင်ကို တအုပ်တည်း ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည် ၁၈၂ဝ ခုနှစ်ကပြုစုခဲ့သော အဘိဓာန်မှာ မပြည့်စုံသဖြင့် ၁၈၄၂ ခုနှစ်တွင် အဘိဓာန်ကို နှစ်စောင်ခွဲ၍ စတင်ပြုစုလေသည်။ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ကို ၁၈၄၉ ခုနှစ် ဇန္ခဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်သည်။ ထို့နောက် အဘိဓာန်ကို ဆက်လက်ပြုစုနေခိုက် မကျန်းမမာဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈၅ဝ ခုနှစ် ဧပြီလ ဂ ရက်နေ့တွင် ယုဒသန်သည် မော်လမြိုင်မြို့မှ သင်္ဘောဖြင့် ပင်လယ်ခရီး ထွက်သွားရာ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်လေသည်။ ယုဒသန်၏ အလောင်းကို ပင်လယ်ပြင်တွင်ရေမြှတ်သဂြိုလ်လိုက်ကြသည်။
ယုဒသန်၏ လက်ငုတ်ဖြစ်သော မြန်မာ အဘိဓာန်ကို သာသနာပြုဆရာ အီးအေ၊ စတီဖင်က ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ ၁၈၅၂ ခုနှစ်တွင် မော်လမြိုင်မြို့ အမေရိကန် သာသနာပုံနိုပ်တိုက်၌ ပထမအကြိမ် စက်တင် ပုံနိုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ယုဒသန်သည် အဘိဓာန်နှင့် ခရစ်ယန်ကျမ်းများအပြင် ရွှေချန်ခွင် စာအုပ်ကို ၄င်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီး ဝတ်ဆင်ပုံ စာတမ်းကို ၄င်း၊ ပိဋ္ဋကတ်အနှစ်ချုပ် ကျမ်းကို၎င်း မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးခဲ့လေသည်။
ယုဒသန်သည် ပထမ ဇနီး အန်း ဟေဇယ်တိုင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် ၁၈၃၄ ခုနှစ်တွင် မစ္စစ် ဗော့ဒမန်ဆိုသူ မုဆိုးမတဦးနှင့် ဒုတိယ အိမ်ထောင်ပြုသည်။ တဖန် ဒုတိယ ဇနီးကွယ်လွန်ပြန်၍ ၁၈၄၆ ခုနှစ်တွင် မစ္စအမ္မလီချူးဗက် ဆိုသူနှင့် တတိယ အိမ်ထောင်ပြုလေသည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သောသားသမီးများအနက် သားဖြစ်သူ အက်ဒွပ် ဂျပ်ဆင်သည် ယုဒသန်၏ အထုပ္ပတိကို ရေးခဲ့လေသည်။ ယခင်က ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သော ဂျပ်ဆင်ကောလိပ်မှာ ယုဒသန်အထိမ်းအမှတ်ကျောင်းပင်ဖြစ်သည်။
မြန်မာစွယ်စုံကျမ်း အတွဲ ၁ဝ၊ (၁၉၆၆) စာမျက်နှာ
ဆရာယုဒသန် ၃၅နှစ်ကြာ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်တွင် မြန်မာ၊ကရင် ၇၀၀၀ ကျော် နှစ်ခြင်းခံပြီး ခရစ်တော်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ သိက္ခာတင်ပွဲတော် ၆၃ကြိမ်ကို မစ်ရှင်အဖွဲ့ပေါင်း ၁၆၃ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်ခြင်းဖြင့် ဒေသခံ ဓမ္မဆရာ၊လက်ထောက်ဓမ္မဆရာ များစွာ မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခြားအသင်းတော်များဖြစ်သော မက်သဒစ်၊ ပရက်ဘာတာရီယန်၊ စသည့် အသင်းတော်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်းရွက်ခြင်းများ .. စသည့် ဆရာကြီးယုဒသန်၏ ဘ၀ခရီးစဉ်၊ သူ၏ ဘ၀ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အတူးသဖြင့် အင်းဝနေပြည်တော်တွင် အကျဉ်းခံရခြင်း နှင့် ဧ၀ံဂေလိခရီးစဉ် အားလုံးတို့သည် ခရစ်တော်အားဖြင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
၁၇၈၈ သြဂုတ် ၉ ရက်နေ့၊ အမေရိကန် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ မောဒန် မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဖခင်သည် မြို့ငယ်လေးမှ ခရစ်ယန်သင်းအုပ်ဆရာတဦးဖြစ်သည်။
၁၈၀၄ ၁၆နှစ် ဘရောင်း တက္ကသိုလ်မှ ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။
၁၈၀၇ ၁၉နှစ် ဘီအေဘွဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့သည်။
၁၈၀၇ ၁၉နှစ် အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါစာအုပ်တအုပ် နှင့် သင်္ချာစာအုပ်တအုပ် ပြုစုပြီးစီးခဲ့သည်။ တက္ကသိုလ် လောကီပညာ
သင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို သံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ မိသားစုနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး နယူးယောက်
၁၈၀၈ ၂၀နှစ် ခရီးသွားရင်း မြို့ငယ်လေးတည်းခိုခန်းတခန်းမှ
ညည်းညူသေဆုံးသွားသူ လူငယ်တဦးသည် တက္ကသိုလ်တက်စဉ်က ပညာတော်သူ မိမိသူငယ်ချင်း
ဘာသာမဲ့တဦးဖြစ်သည်ကို အံ့သြဘွယ် ကြုံခဲ့ရပြီး မိမိ မိသားစုထံ ပြန်လာခဲ့သည်။ ကျမ်းစာသင်တန်း
Andover Seminary တွင်ဆက်လက်တက်ခဲ့သည်။
၁၈၀၉ ၂၁နှစ် Plymouth အသင်းတော်တွင် ပါဝင်ပြီး ဧ၀ံဂေလိခရီးစဉ်အတွက် အသင်းတော်များနှင့် ညှိနှိုင်း
လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အသင်းတော်များမှာ လူငယ်များမစ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက် နှစ်နှင်ချီပြီးဆွေးနွေး
တိုင်ပင်၊ ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
၁၈၁၁ ၂၃နှစ် လန်ဒန်မြို့သို့ သင်္ဘောစီးပြီး လန်ဒန်မစ်ရှင်အဖွဲ့နှင့် ထောက်ပံမှုရရေးအတွက် ညှိနှိုင်းသည်။
၁၈၁၂ ၂၄နှစ် အန်းနှင့် လက်ထပ်သည်။ သိက္ခာရဘုန်းတော်ကြီးအဖြစ် ဘိသိတ်ပေးခံရသည်။ ဘော့စတွန်မြိုမှာ
သင်္ဘောဖြင့် အိန္နိယပြည်၊ ကာလကတ္တားမြို့ အမေရိကန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ ရောက်ရှိသည်။
၁၈၁၆ ၂၈နှစ် မြန်မာစကား၊စာပေ ကို ၆လခန့်အပြင်းအထန် ဟိန္နူလူမျိုးတဦးထံမှသင်ယူသည်။ ၃နှစ်ခန့်အကြာ မြန်မာစကား၊ စာပေ
ကို မြန်မာပညာရှင် တဦးကဲ့သို့ တတ်မြောက်ခဲ့သည်။ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် အဘိဓာန်၊ ပါဠိ - မြန်မာ အဘိဓာန်ကို စတင်ပြုစုရင်း
မြန်မာကျမ်းစာအုပ် ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ကို ဟေလသ (ဂရိ) ဘာသာမှ ဘာသာပြန်ဆို ပြီးစီးခဲ့သည်။
၁၈၁၉ ၃၁နှစ် လူထုတရားပွဲများ ရွေဓိဂုံဘုရားအနီး ဇရပ်တွင် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မောင်နောသည် ပထမဆုံးသော နှစ်ခြင်း
ခံယူသည့် မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်။ (၁၉၁၉ ဇွန် ၂၇)။ ထို့နောက် မောင်သာလှ၊ မောင်ဗြေ တို့နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။
မြန်မာဘုရင် ဘကြီးတော် မင်းတရားထံသွားရောက်ပြီး ရွှေမြန်မာကျမ်းစာအုပ်လက်ဆောင်ပေးအပ်ရင်း
၁၈၂၀ ၃၂နှစ် ထို့နောက် သာသနာပြုခြင်းမျာ နှေးကွေးသွားခဲ့သည်။ နှစ်ခြင်းခံသူ ၁၀ဦးခန့်ဖြင့် အသင်းတော်ငယ် စတင်ခဲ့သည်။ ကာလကတ္တားမြို့သို့
ဇနီးသည် ဆေးကုရင်း မြန်မာပြည်မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ နှစ်လအကြာ ပြန်လာခဲသည်။ မြန်မာပညာတတ် မောင်ရွှေဂုံး နှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာသော
မိတ်ဆွေ၂ဦးတို့ နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ မောင်ရွှေဂုံးသည် မြန်မာကျမ်းစာဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကို အထူးကူညီသူဖြစ်သည်။
၁၈၂၄ ၃၆နှစ် အင်္ဂလိပ်မြန်မာ ပထမစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်များ အအောက်မြန်မာပြည်ကို သိမ်းယူခဲ့သည်။ ဆရာယုဒသန်မောင်နှံကို မြန်မာဘုရင် ဘကြီးတော်မင်းတရားက
အင်းဝနေပြည်တော်သို့ သူလျှိုအဖြစ် စွတ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။
၁၈၂၆ ၃၈နှစ် သမီး မေရီအဲလစ်စဘက် မွေးဖွားပြီး၊ ရန်ကုန်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။ ရန်ကုန်အသင်းတော်မှာ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး၊
မော်လမြိုင်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရင်း အသင်းတော်ထူထောင်သည်။ ကျမ်းစာဘာသာပြန်ဆက်လုပ်သည်။
ပထမဇနီးသည် ကွယ်လွန်သည် (၁၈၂၆) ။ ဖခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သည် (၁၈၂၇)။
၁၈၃၄ ၄၆နှစ် ဒုတိယဇနီးသည် မစ္စစ် ဗော့ဒမန် နှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။
၁၈၃၅ ၄၇နှစ် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ မြန်မာဘာသာပြန်မှု ပြီးဆုံးသည်။ (ဒီဇင်ဘာ ၂၉)။
၁၈၃၅ ၄၇နှစ် အမေရိကားသို့ သင်္ဘောဖြင့်ပြန်ရာလမ်းတွင် ဇနီးသည် ကွယ်လွန်သည်။ (၁၈၃၅)
ဘော့စတွန်မြို့သို့ အောက်တိုဘာ ၁၅ - ၁၈၃၅ တွင် ရောက်ရှိသည်။ အမေရိကန်အသင်းတော်များတွင် အမေရိကန်စကားဖြင့် မြန်မာသာသနာပြု
ခရီးစဉ်ကို တင်ပြ၊ ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၄၅ ၅၇နှစ် မစ္စအမ္မလီချူးဗက် နှင့် အိမ်ထောင်ပြုသည်။ ၁၉၄၆ ဇူလိုင်၁၁တွင် မြန်မာပြည်သို့ ပြန်လာကြသည်။
၁၈၄၆ ၅၈နှစ် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓါန် ပြီးစီးခဲ့သည်။
† Murann Ezine
Posted by myu shadan at 8:09 PM No comments:
( hugawngkachin.blogspot.com kawn hta garan nngai )